16/06/13 - 23/06/13 (132)
နိုင်ငံရေး အမြင်နဲ့ ဖြန့်ကျက် ကြည့် မယ် ဆိုရင် တချို့ ကိစ္စရပ် တွေမှာ လုံးလုံး မတူနိုင်သည့်တိုင်… အခြေ နေတွေ…ဖြစ်စဉ်တွေဟာ အနည်းနဲ့အများ တူညီနေတာတွေ ကိုတွေ့ရ တတ် ပါတယ်… ဒါကလည်း သိပ်မဆန်း ပေဘူး ပေါ့…. လူသားတွေ နေထိုင် နေကြ တဲ့… ဒီလောကကြီးမှာ….အသွင်ပြင် သဏ္ဍန်သာ ကွဲပြား ခြားနား နိုင်ပေမဲ့ အတွင်းအနှစ်သာရ ပိုင်းဖြစ် တဲ့ လောဘ၊ ဒေါသ ၊ မောဟ ထူပြောမှု့မှာ…
.အနည်းနဲ့ အများဆို တော့ လူဟာ လူ ပါပဲလေ။
တောင်အာဖရိက နိုင်ငံက အသားရောင်ခွဲခြားမှု့ ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှု့ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်၊ သမ္မတဟောင်းတဦးလည်းဖြစ် ၊နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် လည်းဖြစ်တဲ့ နယ်လ်ဆင် မင်ဒရဲလား ဆိုတာကိုတော့ တော်တော်များများ သိနေကြပါတယ်။ သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှု့တွေ အကြောင်းကိုလည်း သိကြပါတယ်… ကျနော် တင်ပြချင် တာက အဲဒါတွေမဟုတ်ပါဘူး…။ နှစ်ပေါင်း ၃၈ နှစ်တိုင် ချစ်ကြိုးတွေသွယ်ကာ ရစ်ခါနဲ့ ခရောင်းလမ်းကို အတူလျှောက်ခဲ့ပြီးခါမှ…..လမ်းခွဲခဲ့ကြတဲ့…မင်ဒရဲလား နဲ့ သူ့
ဇနီး ၀င်နီမင်ဒရဲလား အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်….သာမာန်ကြည့်မယ်ဆို လင်မယားကွဲတာ
များ အဆန်း လုပ် နေရ သလား လို့ ထင် စရာ အကြောင်း ရှိပါတယ်…ဆန်း ပါတယ် သိပ်ကို ဆန်း ပါတယ်…တကယ်တော့ သူတို့ လင်မယားနှစ်ယောက်ကွဲပြဲ လမ်းခွဲရခြင်း အကြောင်းတရား အခြေခံ ဟာ….နိုင်ငံရေး ကြောင့်ပါလို့ပြောရင် သိတဲ့သူနည်း နေပါသေးတယ်….။ သိတဲ့သူတွေ လည်း သိနေပြီး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်
သို့သော် မသိသေးတဲ့ သူတွေအတွက် နိုင်ငံရေး အတွေ့အကြုံကို လက်ဆင့်ကမ်း ယူကြတာပေါ့…….စာရေးဆရာ အောင်သင်း ခနခဏ ပြောတဲ့ စကား ကိုပဲ ထပ်မံကိုးကား ပြောပရစေ..လူမိုက်ဆိုတာ ကိုယ်တိုင်မှားမှ နောင်တရတယ်တယ်တဲ့ လူလိမ္မာ ဆိုတာ သူများအမှားကို သင်ခန်းစာ ယူတယ်တဲ့….အလွန် မိုက်မဲသော သူများ က ကိုယ်တိုင် မှားတာ တောင် သံဝေဂ မယူကြဘူးတဲ့။ အဲဒီတော့ စောစောက ဟာခရီးဆက် ကြည့်ရ အောင် ဒီအကြောင်း မပြောခင် တောင်အာဖရိက လှုပ်ရှားမှု့ အကြောင်း လေး အကြမ်း သဘောတင်ပြ ချင် သေးတယ်
နိုင်ငံမှာ လူဖြူ နဲ့လူမဲ ဆိုတာရှိပါတယ်…..ဒါပေမဲ့ လူနည်းစုက လူဖြူတွေဖြစ်ပြီး လူအများစုက လူမဲတွေပါ၊ လူနည်းစု ဖြစ်တဲ့ လူဖြူတွေ ဟာ နိုင်ငံတော် အာဏာကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ချုပ်ကိုင် ထားပြီး လူမဲေ တွကို ဖိနှိပ်မှု့ တွေ ခွဲခြားဆက်ဆံမှု့တွေနဲ့ နှိပ်ကွပ်လာရာက အစ မခံနိုင်တော့တဲ့အဆုံး လူမဲတွေဟာ အသားရောင်ခွဲခြားမှု့ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှု့ တွေ
ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ ပါတယ်။ အဲဒီလှုပ်ရှား မှု့ကို အဓိက ဦးဆောင်ခဲ့တာ ကတော့ အေအင်စီ ပါတီ ဆိုတာပဲ ဖြစ် ပါတယ် ၊ နယ်လ်ဆင်မင်ဒရဲလား
ဟာ အဲဒီ့ပါတီ ရဲ့ ခေါင်းဆောင် တဦးပါ။ လူဖြူ အစိုးရဟာ သူ့ကိုဖမ်းပြီး ထောင်သွင်းအကျဉ်းချထားလိုက်တာ ( ၂၇ ) နှစ်တောင်ကြာခဲ့ပါတယ်……ဒီလိုနဲ့ နေလာရင်းက အကျဉ်းစခမ်းထဲမှာ မင်ဒရဲလားဟာ စဉ်းစားလာတယ် တောင်အာဖရိကနိုင်ငံရဲ့ အသား ရောင် ခွဲခြား မှု့ ဆန့်ကျင်ရေး အပေါ်သုံးသပ် မိလာတယ်…… လူမဲတွေ အများစုဟာ သေကျေ ပျက်စီးခဲ့ ရပြီ ထောင်တွင်း မှာလည်း နှစ်ရှည်လများ အကျဉ်းချခံ နေရသူတွေ ဘ၀ပျက်သွား သူပျက် နေ သူ တွေဆိုတာ လည်းဒုနဲ့ဒေး၊ အခုထိလူမဲ လွတ်မြောက်ရေးလမ်းစ ဆိုတာ သဲသဲကွဲကွဲ မမြင်နိုင် သေးဘူး…… ကမ်းမမြင် လမ်းမမြင်ကူးခပ်နေဆဲ…. တဘက် လူဖြူအစိုးရကိုလည်းကြည့် အချိန်နဲ့ အမျှ လူမဲတွေရဲ့အနုနည်း အကြမ်းနည်းတွေနဲ့ ဆန့်ကျင်ခံရ မှု့ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းဝိုင်းရဲ့ ၀ိုင်းဝန်း ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချ ခံရမှု့ တိုင်းပြည်ရဲ့အထွေထွေ စီးပွားကျဆင်းမှု့ဒါတွေ အားလုံးဟာ နှစ်ဘက်စလုံး အတွက်အနှုတ် လက္ခဏာ ဆောင်သော ဖြစ်စဉ်တွေလို့ရှုမြင်မိလာတယ်……… .ရယ်ဒီကယ်လစ်ဇင်
(တော်လှန်အမြစ်ဖြုတ်ဝါဒ) အပေါ်သံသယရှိလာတယ်..။ တိုက်ပွဲနဲ့အောင်ပွဲမှာတခုပဲရှိရမယ်.. အောင်ပွဲမရှိရင်တိုက်ပွဲ… တိုက်ပွဲမရှိရင်အောင်ပွဲဆိုတဲ့…လမ်းရိုးလမ်း ဟောင်းကနေခွဲထွက်ဘို့ကို… အားသန် လာတယ်…နိုင်ငံရေး ဖြစ်စဉ် တခုမှာ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး အဖြေရှာ ခြင်းဖြင့် လည်း လှမ်းလို့ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့…. အတွေးအခေါ်က မြစ်တွယ်လာတယ်……ဒါပေမဲ့…
ဒီကိစ္စဟာ ထင်သလောက်တော့မလွယ်နိုင်ဘူး…. အရင်ဆုံးရင်ဆိုင်ရမှာက…. သူ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင် ဘက်ရဲ ဘော် တွေ….ဒါကို နားလည်အောင်ရှင်းပြရမယ်….
ဒီလိုနဲ့မင်ဒရဲလားဟာ.. အကျဉ်းထောင်အတွင်းက နေလူဖြူအစိုးရနဲ့ ဆက်ဆံရေးလမ်းကြောင်း ကိုစတင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်…..။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခက်အခဲ ဆိုတာ ရင်ဆိုင်ရမယ် ဆိုတာ သူက ကြိုတင် ခန့်မှန်းပြီး သားပါ…ဒေါသ တွေထွက်ခဲ့ရ တယ်…အံကြိတ်ခဲ့ရ တယ်… သီးခံခဲ့ရတယ်… ဇွဲရှိခဲ့ရ တယ်….. သူရဲ့ကြိုးစားမှု့တွေ ဟာ အတိုင်းတာ တခုမှာအရာထင်လာခဲ့တယ်… လူဖြူအစိုးရက သူ့နဲ့ လာရောက် ဆွေးနွေးမှု့တွေ စတင်လာခဲ့တယ်…… တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး လမ်းကြောင်း ကပွင့်လာပြီ… အဲဒီမှာပြသနာက….သူ့ရဲဘော်တွေကသူ့ကိုအယုံအ ကြည်မရှိ ဖြစ်လာ ကြ တယ် လေ…ဖောက်ပြန် သွေဖီသူအဖြစ်မြင်လာကြ တယ်…..အဆိုးဆုံး ဖြစ်ရပ်က တော့ သူသိပ်ချစ် သိပ်အားကိုး အားထား နေရတဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ ၀င်နီမင်ဒရဲလား ကိုယ်တိုင်က. .ငြိငြင်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်…..၀င်နီ
ခံယူထားတာ က “ သွေးစွန်းသောလက်တွေနဲ့ဘယ်တော့မှ လက်ဆွဲနှုတ်မဆက်ဘူးတဲ့ ” ……….
၀င်နီမင်ဒရဲလားဟာ တောင်အာဖရိက လူမဲလူထုအပေါ်မှာ နိုင်ငံရေးသြဇာရှိ သူတယောက်ပါ… အထူးသ ဖြင့် လူမဲလူငယ်ထုရဲ့မိခင်ဖြစ်ခဲ့တယ်…..သူက မင်ဒရဲလားရဲ့စေ့စပ် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှု့ အယူအဆကို လုံးလုံးလက်မခံခဲ့ဘူး….. လူငယ်တွေက သွေးထိုး
လှုံ့ဆော် မြှောက်ပေးခဲ့တယ်….. ဆက်လက်ပြီး အကြမ်းဖက် လုပ်ရပ်တွေကို အစဉ်ဆက်မပြတ်လုပ် ဆောင်လာခဲ့တယ်… .အဆိုးဆုံး ကိစ္စကတော့…Necklace လို့ခေါ်တဲ့ အကြမ်းဖက်လုပ်ငန်းစဉ်ပဲ ( Necklace ဆိုတာ အင်္ဂလိပ် ဝေါဟာရ မှာ လည်ဆွဲ ဆိုတဲ့ဖွင့်ဆိုချက်နဲ့ လှပ သလောက် နိုင်ငံရေး နယ်ပယ်မှာ ကြောက်စရာ ကောင်းတယ်….… အုပ်ချုပ်သူအစိုးရရဲ့ အာဏာစက် ပျောက်ပြီး…လူအုပ်ကြီးက သူ့တို့ သဘောထား သူ့တို့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့စီရင် အကြမ်းဖက်တာ ကို ခေါ်တယ်… ဒါကတောင်အဖရိကမှာ တင်မကပါဘူး…. နိုင်ငံ တော်တော် များများမှာ ဖြစ်ပျက် နေစဲပါ… ဥပမာထိုင်းနိုင်ငံမှာ မြန်မာ နိုင်ငံသား ရွေ့ပြောင်း အလုပ်သမားတွေ ကို ထိုင်းလူမျိုးတချို့က ကားတာယာတွေ စွပ် လည်ပင်းလေးပဲဖော်ထားပြီး ဓါတ်ဆီလောင်း မီးရှို့သတ်တာ မျိုး… .တောင်အာဖရိကမှာလည်း Necklace တွေ က ဒီနည်းကို အသုံးပြု တတ်ကြတယ် ) သူတို့ရဲ့ ပစ်မှတ်က လူဖြူ အစိုးရနဲ့ လူဖြူတွေတင် မကတော့ ဘူး သူတို့ လူမဲအချင်းချင်း တွေ ပါ အသတ် ခံ ရတဲ့ အထဲမှာ ပါဝင် လာတယ်…ကမ္ဘာမှာတော့ (Black..on..Black…violence) လို့ကျော်ကြားတယ်…..လူမဲ အချင်းချင်းလည်း
တယောက်ကိုတယောက် မယုံကြည်ကြတော့ ပဲ… စိတ်မထင်ရင် မထင်သလို အစိုးရဘက်တော်သား ၊ အစိုးရကိုထောက်ခံသူ သတင်းပေး ဆို သတ်ဖြတ် ကြတယ်။ အပြစ်မဲ့ လူမဲပြည်သူတော်တော် များများ Necklace တွေလက်ချက်နဲ့ အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတယ် ။ နောက်ဆုံးမတော့ ၀င်နီမင်ဒရဲလား ကိုယ်တိုင် ၁၄ နှစ်သားလေး တစ်ယောက်ကို ရက်ရက်စက်စက်သတ်ဖြတ်မှု့မှာ နောက်ကွယ်က ပါဝင်တယ်ဆို….အရေးယူအပြစ်ပေးခြင်းခံခဲ့ရပြီး…ထောင်နန်းစံခဲ့ရတယ်လေ။ အရင်ကထဲက အေအင်စီ ပါတီအနေနဲ့ ၀င်နီမင်ဒရဲလား ကိုသဘောမတွေ့ ခဲ့ပါဘူး…..ဒါပေမဲ့ မင်ဒရဲလားရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အရ မေတ္တာ ရပ်ခံ ချက် အ ပေါ်မှာသီးခံ နေကြတယ်…နောက်တော့ မင်ဒရဲလား ကိုယ်တိုင် လုံးဝ ခွင့်မလွှတ် နိုင်တော့တဲ့ အနေထားကို ရောက်ရှိ လာတော့တယ်……. တဘက်က လူဖြူ အစိုးရ ဟာအခုလို အကြမ်းဖက် လှုပ်ရှားမှု့များကို လက်ညှိုးထားလာကြ တယ်….လူမဲတွေဟာ …နိုင်ငံ ရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး ကိစ္စတွေ မှာဝင်ရောက်နိုင်လောက်အောင် ယဉ်ကျေးသူတွေ မဟုတ် ဘူးတဲ့………
တကယ်တော့ ၀င်နီမင်ဒရဲလား ဟာ မင်ဒရဲလား ထောင်သွင်းအကျဉ်းကျခံနေရ ဆဲ ကာလ များမှာ အေအင်စီ ပါတီကို ဦးဆောင်ခဲ့သူ အသားရောင်ခွဲခြားမှု့ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှား မှု့များ ကို စဉ် ဆက်မပြတ် လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့သူ…မင်ဒရဲလား လွတ်မြောက်ရေးနဲ့ …နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာ သြဇာ သိက္ခာရှိရေး ကို အစွမ်းကုန် လုပ်ဆောင် ပေးခဲ့သူ … .ဇနီးကောင်း တဦးဖြစ် ခဲ့ပါတယ်… သို့သော် လည်း… အချစ်တွေ မေတ္တာတရားတွေ…အနစ်နာခံမှု့တွေနဲ့ရစ်နှောင် လာခဲ့တဲ့ အိမ်ထောင် သက် ၃၈နှစ် တာကာလအရောက်မှာတော့… .ယုံကြည်မှု့တွေ ကွဲပြားခဲ့ကြတဲ့ ဇနီးမောင်နှံဟာ လမ်းခွဲခဲ့ကြ ပါတယ်…..။
သူတို့နှစ်ဦးလမ်းခွဲအပြီး သတင်းဌာန တွေကို ပြောကြ ဆိုကြတဲ့စကား တွေ တချို့က လည်း စိတ်ဝင်စားစရာပါ ။ ၀င်နီက ပြောတယ်……… “ကျမ…သူ့အပေါ်ကိုဘယ်လောက်
အနစ်နာ ခံ ပေးဆပ်ခဲ့ သလည်း ဆိုတာ…. အားလုံး သိ ပါတယ်… လင်သား တယောက်အနေနဲ့ရော… ခေါင်းဆောင်တယောက် အနေ နဲ့ပါ…ရိုသေ လေးစားခဲ့ပါတယ်…ဒါပေမဲ့… လူဖြူအစိုးရ နဲ့ လက်ကမ်း ပြီး…စေ့စပ် ဆွေးနွေး အပေး အယူလုပ် ကထဲက သူ့ အပေါ်ကို ကျမ တော်တော် ငြိုငြင် မိတယ်….အဆိုးဆုံး ကတော့…ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုကို… သွေးစွန်းတဲ့ လူသတ်လက်တွေနဲ့….. ယှဉ်တွဲယူတဲ့ အပေါ် ကျမ လုံးဝ မကျေနပ် ဘူး…ဒီကိစ္စ ကို တားတယ်…… မင်ဒရဲလား ဟာ…တောင်အာဖရိကရဲ့လူမဲတော်လှန် ရေးကို အမြတ် ထုတ်သွားသူတယောက်ပါ……
မင်ဒရဲလားကတော့ သိပ်ရှည်ရှည် ဝေးဝေး မပြောခဲ့ဘူး……ဒီအထဲက လိုရင်းလေး တချက်က သိပ်ကောင်းတယ်…..မျိုးချစ်မျက်ကန်း ဆိုတာ…မျိုးချစ်မဟုတ် ပါဘူးတဲ့……..
တောင်အာဖရိက မှာရှိတဲ့ လူထုဟာ မင်ဒရဲလားရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကို တဖြေးဖြေးခြင်း နားလည်လာ ကြ တယ်…. နယူးယောက်တိုင်း(မ်) သတင်းစာမှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့….တောင်အာဖရိက ကလူမဲ ဆရာဝန် တယောက်ရဲ့ ထင်မြင်ချက်က လည်း….
မင်ဒရဲလားရဲ့လုပ်ဆောင်ချက် များ အပေါ်သံသယရှိခဲ့တယ်… သတိကြီး စွာနဲ့ စောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်…. တကယ်က သူ့ရဲ့လုပ်ရပ်ကမှန်ကန်တယ်ဗျ…… ဒီနေ့တောင် အာဖရိကမှာ အစစအရာရာ နိမ့်ကျ နေတဲ့….လူမဲထုရဲ့ ဘ၀ကို လက်တွေ့ ကျကျ မြှင့်တင် လိုတယ်…. အဲဒီလို မြှင့်တင်ဘို့ဆိုတာ… တော်လှန်ရေးနဲ့ တဘက်ကို တဘက် အမြစ်ပြတ် ချေမှုန်း သွားလို့ မဖြစ်နိုင် ဘူး… လူမဲ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ ကလည်း ဒါတွေကို စိတ်ကုန် နေပါပြီဗျာ….. ကျနော် ကတော့… ၀င်နီမင်ဒရဲလား ရဲ့ Necklace တွေကိုကြည့်ပြီး…တော်တော် အော့နှလုံးနာမိတယ်….. ဒီနေ့လူထု လိုလား တာ… တန်းတူ အခွင့်ရေးတွေရ ဘို့နဲ့. နိမ့်ကျနေတဲ့ဘ၀တွေကို မြှင့်တင်ပေးဘို့ပဲ…ဒါတွေသာ ပြည့်စုံအောင်လုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆို ကျေနပ် တယ်….. တဘက်နဲ့တဘက် အငြိုးအာဃာတကြီးတွေနဲ့ ချေမှုန်း တိုက်ခိုက် နေမှု့တွေကိုလည်း စိတ်မ၀င်စားဘူး…….ကျနော်ကတော့ မင်ဒရဲလား လုပ်ရပ်ကို အကြွင်းမဲ့ ထောက်ခံတယ်….”
တခါက တောင်အာဖရိက နိုင်ငံရဲ့လူမဲပြည်သူတွေအပေါ်မှာ နိုင်ငံရဲ့မိခင် လို့တင်စားသတ်မှတ်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ ၀င်နီမင်ဒရဲလားတစ်ယောက်ကတော့…ခုတော့သူ့ကို
အများစုက (the woman once called the "mother of the Nation" by many black South Africans but now called the "mugger of the Nation" ) မုဆိုးတပိုင်း မိန်းမရိုင်းလို့ သတ်မှတ်ခေါ်ဝေါ်နေကြပါပြီ
အနှစ်ချုပ်အားဖြင့်တင်ပြလိုတာ ကတော့….. ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း…. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဟာ. . လက်ရှိ
နဲ့ပူးပေါင်းဆွေးနွေး လုပ်ဆောင်ခြင်း အပေါ်….ဝေဖန် တိုက်ခိုက် နေသူများ လည်းရှိနေပါတယ်….ဒါကလည်းသူတို့ယုံကြည်ချက်သူတို့ရှုဒေါင့်နဲ့ပဲလေ…..ကျနော်တို့ပြည်သူလူထုဟာ.ခေါင်းဆောင်ကို
အားကိုးတယ်….. ဒါပေမဲ့ မျက်စိမှိတ်ပြီး..အားကိုး ကြ တာတော့ မဟုတ် ပါဘူး…ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဟာ အားကိုး ထိုက်တဲ့ ခေါင်းဆောင် ဖြစ်နေလို့ အားကိုး ကြတာ…အနိမ့်ဆုံး လူတွေမှာ ဘယ်ဟာ အကောင်း လည်း ဘယ်ဟာ အဆိုးလည်း ဆိုတာခွဲခြားနိုင်တဲ့… အတွေးအခေါ် လောက်တော့ ရှိနေပါတယ်…. . ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပေါ် ဝေဖန် တိုက်ခိုက် နေ မှု့များ ဟာ လည်း… တကယ်တော့…
၀င်နီမင်ဒရဲလား… မင်ဒရဲလား ကို တိုက်ခိုက် တာလောက် မဆိုးသေးပါဘူး…. ၀င်နီမင်ဒရဲလား လောက် လည်း စွမ်းစွမ်း တမံ… မနှောက်ယှက်နိုင်လောက်ပါဘူး… .၀င်နီမင်ဒရဲလားလောက်လည်း နိုင်ငံရေးသြဇာမရှိပါဘူး…ဒီလို
နိုင်ငံရေးသြဇာရှိတဲ့သူကတိုက်တာတောင် မင်ဒရဲလား ဆိုးဆိုးဝါးဝါးဘာမှဖြစ်မသွားပါဘူး..ဒီတော့… ကြီးကြီးမားမားစိုးရိမ်ဖွယ်ရာ မှာမရှိပါဘူး….ဝေဖန်တိုက်ခိုက်နေသူများကလည်း…ဝေဖန်တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့
ပြည်သူလူထုတရပ်လုံးရဲ့တာဝန်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ၀န်းရံပေးဘို့ပါပဲ………….
အားလုံးကိုလေးစားစွာဖြင့် ( မောင်မောင်ဝမ်း )
11/12/2011 09:20:00 PM
ပြည်သူနဲ့ အစိုးရကြား အမှန်တိုင်းရေးပြောသည့် ဂျာနယ်တစ်စောင်
မြန်မာပြည်ဟာ သူများနိုင်ငံတွေနဲ့ မတူအောင် နိုင်ငံရေး နိုင်ငံ့အရေးကို အပြောများကြတယ်လို့ ယူဆရတယ်။ တိုင်းပြည်ဟာ တစ်ဗိုလ်ဆင်း တစ်ဗိုလ်တက်စနစ်နဲ့
အာဏာရှင်တွေရဲ့ စစ်ဖိနပ်အောက်မှာ ပြားပြားဝပ်ခဲ့ရတယ်။ တစ်ကြိမ်မှာတော့ တံခါးပိတ်ဝါဒဆိုပြီးတော့ ဘယ်နိုင်ငံနှင့်မှ အဆက်အသွယ်မလုပ်ပဲ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုလုံး မျက်စိပိတ်နားပိတ်ဖြစ်အောင် လုပ်ပစ်ခဲ့ကြတယ်။ ဦးနေဝင်းလက်ထက်ကတည်းက
လက်ရှိအချိန်ထိ တိုင်းပြည်ဟာ စီးပွားရေးချွတ်ခြုံကျခဲ့တယ်။ တစ်ဗိုလ်ပြီး တစ်ဗိုလ် တက်လာသမျှ တွေကလည်း အားလုံးအာဏာရှင်တွေပဲဖြစ်တယ်။ သူတို့အာဏာတည်မြဲဖို့နဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝဖို့ကို လိပ်လိုယက်ရင်း ပြည်သူတွေ ဆင်းရဲခြင်းမက ဆင်းရဲလာခဲ့ရတယ်။
တိုင်းပြည်ရဲ့ ပြည်သူ့ လည်ပတ်ငွေတွေ၊ အဖိုးတန်တွင်းထွက်ရတနာတွေ၊ သစ်တောတွေ၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့တွေ နှင့်
ရေထွက်ကုန် ပစ္စည်းတွေဟာ အာဏာမက်အစိုးရတွေရဲ့ အလွဲသုံးစားလုပ်တာ ခံခဲ့ကြရတယ်။ လူထုကတော့ ငတ်မြဲငတ်နေ ဆဲပဲ။ စားရမဲ့သောက်ရမဲ့ ဖြစ်နေဆဲပဲ။ ဒီတုန်းက စာနယ်ဇင်းသမားတွေလဲမပြောနိုင်ဘူး၊ အကြံပေး အရာရှိလဲ မပြောနိုင်ဘူး။
ဒီလို တစ်မျိုးသားလုံးအကျပ်အတည်း ဖြစ်နေဆဲမှာပဲ လွှတ်တော်အစိုးရသစ်တစ်ရပ် ပေါ်လာတယ်။ ဒီခေတ်မှာ တော့ မျက်စိပိတ်နားပိတ် ထားပေးလို့ မရတော့ဘူး။ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုတွေရှိလာတယ်။ ပြောဖို့အခွင့်အရေး ရှိလာတယ်။
လူထုမှာ ပြောစရာတွေ အများကြီး ရှိကြတယ်။ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး စတဲ့အရေးပါတဲ့ အဓိကအရာ တွေပါမယ်။ ဘက်စုံလိုအပ်နေတာတွေပါမယ်။ တကယ်လို့ ဒီအရေးတွေထဲက တစ်ခုကိုဖြစ်စေ၊ အားလုံးကိုဖြစ် စေ၊ ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုရင် ခေါင်းဆောင်ပြောင်းဖို့လိုမယ်၊ အစိုးရကောင်းဖို့ လိုမယ်။ အဲဒါလည်း ပြောဆိုတဲ့ အထဲပါမယ်။
ဒီတော့ ဒါတွေအတွက် ပြောရမယ်ဆိုရင် နိုင်ငံရေးကို အရင်ပြောရမှာမို့ ပြောဖြစ်ရေးဖြစ်ကြတော့ နိုင်ငံရေးစကား တွေ အများဆုံးတွေ့ကြလိမ့်မယ်။ နိုင်ငံရေးဟာ စားဝတ်နေရေး ၊စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးပဲဆိုတာ အားလုံးသိကြပါတယ်။ အကျုံးဝင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ ဆင်းရဲခြင်းကလွတ်မြောက်အောင် ပြောဆိုနေကြတာလဲ နိုင်ရေးပဲ။ လူတွေနိုင်ငံရေးကို ပြောနေ၊လုပ်နေကြတာဟာ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးကို ပြောနေကြတာဖြစ်တယ်။ စားဝတ်နေရေးအတွက် တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေး အတွက်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာ နားလည်ရတယ်။
ဘာဖြစ်လို့ပြောနေကြတာလဲ။ ကိုယ့်တိုင်းပြည် ကိုယ့်လူမျိုးကိုချစ်လို့ ဒီ့ထက်တိုးတက်စေချင်ကြလို့ လို့ပဲမြင်တယ်။
သိတတ်နားလည်သူတွေ၊ ခေတ်ပညာတတ်တွေအနေနဲ့ Facebook မှာ နိုင်ငံရေးလုပ်နေကြတယ်၊ လေသမား၊ အာသမား၊ ပြောပဲပြောတတ်ကြတယ် ဆိုတဲ့ဝေါဟာရတွေကိုသုံးပြီး အပြစ်တင်ဝေဖန်မနေသင့်ကြဘူး လို့ ထင်တယ်။ Facebook မှာ ရေးပြောနေကြတဲ့ အများစုတွေဟာ ပါတီစင်ပြိုင်ထောင်ပြီး အတိုက်အခံနိုင်ငံရေး လုပ်နေကြတာ မဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံ့အရေး စိတ်ဝင်စားကြတဲ့ သာမန်ပြည်သူတွေပဲ။
Facebook ကြောင့်လူထု အချင်းချင်းဆက်သွယ်မှုခိုင်မာပြီး နိုင်ငံအကြီးအကဲ ပြောင်းလဲသွားရမှုတွေ အပါအဝင် ထင်ရှားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ မမေ့ကြပါနဲ့။ မိမိကိုယ်ကိုလည်း အပြစ်မရှိအပြစ်ရှာ လမင်းကို ခွေးဟောင်သူ ဖြစ်နေသလားဆိုတာ ဆန်းစစ်ဖို့လိုမယ်။
Facebook ကို အသားလွတ် နိုင်ငံရေးလုပ်သူများလို့ မမြင်ပဲ ပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ဇယားတစ်ခု သို့မဟုတ် ပြည်သူ့ခံစားချက်တွေကို ချပြကြတဲ့ ပြည်သူ့ဟစ်တိုင် တစ်ခုလို့သာ ယူဆသင့်ပါတယ်။ Facebook ဟာ သိပ်အားကောင်းတဲ့ ပြည်သူ့ ဟစ်တိုင်တစ်ခုပါ။ အစိုးရတိုင်း လှန်လှောဖတ်ရှုကြရတဲ့ လူထုစာမျက်နှာတစ်ခုပါ။
by Melven Than Facebook
11/12/2011 09:18:00 PM
မသူတော်ပိန်းပါတဲ့ ဖြူဖြူကျော်သိန်းသို့ ဖိုးသိကြားမှ အိပ်ဖွင့်ပေးစာ
စကားအောက်မှာ ဟိုမရောက် ဒီမရောက် ဖြစ်ခဲ့ရသည့် သန်းပေါင်းများစွာသော ပရိတ်သတ်ကိုယ်စား ဖိုးသိကြားမှ ပြန်လည်ရင်ဖွင့်လိုက်ပါ၏..။
11/12/2011 07:24:00 PM
ရန်ကုန်တွင် မီးအား အပြည့်ရစေရန် လျှပ်စစ်မီးကြိုးများ ပြောင်းလဲတပ်ဆင်မည်
ရန်ကုန်မြို့တွင် ယခုကာလအတွင်း လျှပ်စစ်မီးများ ပြတ်တောက်ခြင်း၊ ဗို့အားများ ကျဆင်းနေခြင်းမရှိစေရန် ဓာတ်အားလိုင်းများကို ဗို့အားမြင့်လိုင်းကြိုးများ ပြောင်းလဲတပ်ဆင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၊ လျှပ်စစ်နှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဦးဥာဏ်ထွန်းဦးက ယခုလ ၈ ရက်နေ့၌ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်တွင် ပြောကြားသည်။ ဗဟန်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) မှ ဒေါက်တာညိုညိုသင်း၊ တာမွေမဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) မှ ဦးအေးသိန်း၊ ဒေါပုံမြို့နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) မှ ဦးသောင်းစိန်တို့၏ လျှပ်စစ်မီးနှင့် ပတ်သက်သော မေးခွန်းများနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး ၎င်းက ဖြေကြားခြင်းဖြစ်သည်။ လက်ရှိရန်ကုန်တစ်မြို့လုံးတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုမှာ တစ်နေ့ လျှင် မဂ္ဂါဝပ် ၇၀၀ ကျော် သုံးစွဲနေပြီး ထပ်တိုးသုံးစွဲလာသည်နှင့်အမျှ ဗို့အားများကျဆင်းကာ လျှပ်စစ်မီးအပြည့်အဝ မရရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံလေးရုံမှ ဓာတ်အားများအပြင် ရန်ကုန်မှ မိုင် ၆၀၀ ကျော်ဝေးသော ရွှေလီဓာတ်အားပေး စက်ရုံမှ ကြိုးများဖြင့် ရယူနေရကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။ “အခုလက်ရှိမှာ ၂၃၀ ကေဗီအေ လျှပ်စစ်ကြိုးတွေနဲ့ သွယ်တန်းယူဆောင် နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၅၀၀ကေဗီအေ ကြိုးလိုင်းတွေနဲ့ ဆက်လက်သွယ်တန်းဖို့
ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီး ငွေကြေးသုံးစွဲရမှု များပြားတာကြောင့် နိုင်ငံတော် အဆင့် စီမံကိန်းအနေနဲ့ ဆောင်ရွက် ရမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဦးဥာဏ်ထွန်းဦးကပြောသည်။ ရန်ကုန်မြို့ရှိ အချို့မြို့နယ်များတွင် လျှပ်စစ်မီးပြည့်ဝစွာမရရှိဘဲ ဗို့အားကျဆင်းနေ့ရခြင်းတွင် ရွှေလီဓာတ်အားပေးစက်ရုံမှ လာသည့် ၂၃၀ ကေဗီအေဓာတ်အားလိုင်းကြိုးကို ယခုလ ၄ ရက်နေ့က မသမာသူများ ဖျက်ဆီးခဲ့ခြင်း ကြောင့် ရန်ကုန်သို့ လျှပ်စစ်အဝင် နည်းပါးနေခြင်းဟု ၎င်းကပြောသည်။ ထို့ပြင် လောပိတ ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံတွင်လည်း
လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်နေသည့် စက်နှစ်လုံးကို ပြုပြင်နေရခြင်း၊ အလုံလျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံမှ စက်နှစ်လုံးကိုလည်း လက်ရှိတွင် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းနေရခြင်းတို့ကြောင့် လျှပ်စစ်မီးများ ပြတ်တောက်ခြင်း၊ အားနည်းခြင်းများဖြစ်ပေါ်နေရခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ထို့ကြောင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပြည့်ဝစွာ ပြန် လည်ရရှိမည့်အချိန်တွင် ဗို့အားကျဆင်းမှုများလည်း မဖြစ်ပေါ် စေရန်အတွက် လိုင်းကြိုးများပြောင်းလဲ တပ်ဆင်ရန် စီစဉ်နေရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၂၀၁၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့ထုတ် မြန်မာတိုင်း(မ်) ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
11/12/2011 07:16:00 PM
The Voice 7-48 နိုဝင်ဘာ-၁၂ ရက်နေ့
The Voice 7-48
11/12/2011 07:08:00 PM
အာရှတိုက်ဗဟုဝါဒနဲ့ဖွံဖြိုးရေးညီလာခံကို NLD ရုံးအဖွဲ့မှူး (ဗိုလ်ကြီးဟောင်း) ဦးဝင်းထိန် တက်ရောက်ခဲ့ (ရုပ်/သံ)
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဘာလီကျွန်းမှာ အာရှသားများ လစ်ဘရယ်လ်နဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ကောင်စီက ကျင်းပတဲ့ အာရှတိုက်ဗဟုဝါဒနဲ့ဖွံဖြိုးရေးညီလာခံကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ရုံးအဖွဲ့မှူး နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းဖြစ်သူ (ဗိုလ်ကြီးဟောင်း) ဦးဝင်းထိန် တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းပါ သစ်ထူးလွင်
11/12/2011 06:52:00 PM
ကော့သောင်းမြို့နယ် တောင်သူလယ်သမားအရေး ကူညီမဲ့သူတွေ ရောက်ရှိလာ
တနင်္သာရီတိုင်း၊ကော့သောင်းမြို့နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊တောင်သူလယ်သမားကော်မတီမှ တောင်သူများ၏ ကုမ္ပဏီများနှင့် ဒေသဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်များက အတင်းအကျပ်သိမ်းယူမှုများကို ကူညီဆောင်ရွက်မှု့တွင် ဥပဒေကြောင်းအရ ပိုမိုထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ရှေ့နေကွန်ယက်မှ ဦးဆောင်သူတစ်ဦးဖြစ်သူ ရှေ့နေကြီးဦးအောင်သိန်းနှင့် ခလေးစစ်သားအရေးတို့ကို အဓိကလိုက်လံဆောင်ရွက်ပေးနေသူကိုသက်ဝေတို့
ကော့သောင်း မြို့သို့ ယနေ့နေ့လည် ၁.၀၀ နာရီထိုးတွင်ရောက်ရှိလာပါသည်။
ရှေ့နေ ဦးအောင်သိန်းသည် ကော့သောင်းသို့ရောက်ရှိစဉ် တောင်သူလယ်သမားအရေးကို ဥပဒေ ကြောင်းအရကူညီမှုများပေးပြီး ရှေ့နေကွန်ယက်ဖွဲ့စည်းခြင်းလုပ်ငန်းများကိုပါ တဆက်တည်းပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
သတင်း---အင်အယ်လ်ဒီ ကော့သောင်း ဖေ့ဘုတ် စာမျက်မှ သစ်ထူးလွင်
11/12/2011 06:37:00 PM
တနင်္သာရီ ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက် လေအား လျှပ်စစ် မြန်မာနှင့်ထိုင်း နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းထုတ်မည်
မြန်မာနှင့် ထိုင်း နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်း၍ တနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်
လေအားလျှပ်စစ် ထုတ်လုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း လျှပ်စစ်စွမ်းအားဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။ အဆိုပါ လေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းကို တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကရင်ပြည်နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့တွင် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး လေအား လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း လေ့လာမှုလုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာ ဒေသအာဏာပိုင်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ လေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ရေးစီမံကိန်းသည် လေစွမ်းအင်ဓာတ်အား မဂ္ဂါဝပ် ၂၀၀ စီ ထုတ်လုပ်နိုင်မည့် လုပ်ငန်းအဆင့်ငါးခု ခွဲခြားလုပ်ကိုင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လုပ်ငန်းပထမအဆင့်အနေဖြင့် ၂၀၁၅ တွင် စီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်မည်ဖြစ်ပြီး စီမံကိန်းတစ်ခုလုံး ထုတ်လုပ်နိုင်မည့် ပမာဏ
မဂ္ဂါဝပ် ၁၀၀၀ ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် စီးပွားဖြစ် ထုတ်လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ လေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းများအတွက် လေတိုက်နှုန်းများကို နှစ်အလိုက် လေ့လာမှုများ ပြုလုပ်ရကြောင်း ၂၀၁၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၁၀ ရက်နေ့ထုတ် ရန်ကုန်တိုင်းမ် ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
11/12/2011 06:29:00 PM
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်နှင့် တွေ့ဆုံမည်
ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းသည် နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်နှင့် နိုဝင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့တွင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဘာလီကျွန်း၌ ကျင်းပမည့် လေးကြိမ်မြောက် အာဆီယံ -ကုလသမဂ္ဂ အစည်းအဝေးတွင် တရားဝင်တွေ့ဆုံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်း၏ အကြံပေးအရာရှိ မစ္စတာ ဗီဂျေနမ်ဘီယားက နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့က ရန်ကုန်လေဆိပ်၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် တရားဝင်ပြောကြားသည်။ “အတွင်းရေးမှူးချုပ်က သမ္မတနဲ့ ဘာလီမှာလုပ်မယ့် အာဆီယံ- ကုလသမဂ္ဂ အစည်းအဝေးမှာ တွေ့ချင်တယ်” ဟု မစ္စတာ ဗီဂျေနမ်ဘီးယားက ဆိုသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသို့ တတိယအကြိမ် လာရောက်သော ခရီးစဉ်အဖြစ် ငါးရက်ကြာလာရောက်သည့် ခရီးစဉ် အပြီးတွင် ၎င်းက မြန်မာ့ နိုင်ငံရေးတွင် တိုးတက်မှုများတွေ့ရသော်လည်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရမည့် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရှိနေကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ အကျဉ်းသား လွှတ်ပေးရေးနှင့် မြန်မာ့ နိုင်ငံရေးတွင် အားလုံးပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သော ဥပဒေများပြင်ဆင်မှု ပြုလုပ်ရေးတို့ဖြစ်ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ အကြံပေးအရာရှိက ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။ မှတ်ပုံမတင်ရသေးသော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်မည်၊ မတင်မည်ကိုမူ မိမိအနေနှင့် အသေးစိတ် မသိရှိပါကြောင်း မစ္စတာ ဗီဂျေနမ်ဘီးယားက သတင်းထောက် တစ်ဦး၏ မေးမြန်းချက်ကိုပြန်လည် ဖြေကြားသွားသည်။ မစ္စတာဗီဂျေနမ်ဘီးယားက မြန်မာနိုင်ငံသို့ အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်မှ နိုဝင်ဘာ ၄ ရက်နေ့အထိ လာရောက်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံတော် ဒုတိယ သမ္မတ သီဟသူရဦးတင်အောင်မြင့်ဦး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ အပါအဝင် အစိုးရထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်များ၊ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်များ၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများအားလုံးနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း ၂၀၁၁ ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက်နေ့ထုတ် The Voice ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
11/12/2011 06:14:00 PM
သိမ်ထပ်မင်္ဂလာနှင့် သူရသတ္တိ ရွှေတံဆိပ်ဆုချီးမြှင့်ပွဲ (ဓါတ်ပုံ-သတင်း)
အကျဉ်းချခံခဲ့ရပြီး ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသော သံဃာတော်(၁၂)ပါး ကို သိမ်ထပ်မင်္ဂလာနှင့်ဟံသာဝတီသတင်းစာ
ဆရာကြီး ဦးဝင်းတင်အား သူရသတ္တိ ရွှေတံဆိပ်ဆုချီးမြှင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို ယနေ့ (၁၂၊၁၁၊၂၀၁၁) ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း၊အမှတ် (၁) ရပ်ကွက်(၅၀ကွေ့ကားမှတ်တိုင်အနီး) မကွေးပရိယတ္တိစာသင်တိုက်တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ဓာတ်ပုံမြင်ကွင်းများ
သိမ်ထပ်မင်္ဂလာပွဲနဲ့ သူရသတ္တိ ရွှေတံဆိပ်ဆု ချီးမြှင့်ပွဲ (ရုပ်/သံ)
ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးမှာ ပါဝင်ခဲ့ပြီး အခုအခါ အကျဉ်းထောင်တွေထဲက ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့ သံဃာတော်တွေကို သိမ်ထပ်မင်္ဂလာပြုလုပ်မယ့် အခမ်းအနားတရပ် နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်နေ့မှာ ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
သိမ်ထပ်မင်္ဂလာဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့က ဦးဆောင်ပြီး ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ် မထသ (၁) ရပ်ကွက် အနော်ရထာလမ်း မကွေးပရိယတ္တိစာသင်တိုက်မှာ နံနက် ၉ နာရီကနေ စတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
သိမ်ထပ်မင်္ဂလာပွဲနဲ့အတူ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ ဦးဝင်းတင်ကို မကွေးပရိယတ္တိ စာသင်တိုက် ဆရာတော်က သူရသတ္တိ ရွှေတံဆိပ်ဆု ချီးမြှင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီပွဲကို နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမိသားစုများ အကျိုးဆောင်ကွန်ယက်နှင့်အတူ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေက ပူးပေါင်း ကျင်းပခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
သတင်း---Burma VJ Media Network
11/12/2011 05:26:00 PM
လယ်သမားတွေရဲ့  ဒုက္ခနဲ့ မစုစုနွေး (ရုပ်/သံ)
၁၂ ရက်နေ့က လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့ မစုစုနွေးဟာ
သူ့ရဲ့ပထမဆုံးနယ်ခရီးစဉ်အဖြစ် ပြည်မြို့ကို သွားရောက်ခဲ့ပြီး အနီးနား မြို့နယ်နဲ့ ကျေးရွာတွေက တောင်သူလယ်သမားတွေနဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးရဲ့နေအိမ်မှာ နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့က တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလိုတွေ့ဆုံရာမှာ အဓမ္မလယ်မြေသိမ်းခံရတာမှုတွေ ဘဏ်စုငွေပြန်မရတာတွေအပါအ၀င် အခြားအထွေထွေပြသနာတွေနဲ့ပက်သက်လို့ တောင်သူလယ်သမားတွေဘက်ကတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီဆွေးနွေးပွဲကို မကွေးတိုင်းအတွင်း စစ်စရန် ၊ ၀ဲကြီး ၊ ထောက်မ ၊ ကံမစတဲ့ကျေးရွာတွေနဲ့ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးက ပန်းတောင် ၊ တလုတ်ပင် ၊ ဥသျှစ်ပင် ၊ သူရဲတန်း ၊ သီးကုန်း ၊ စတဲ့မြို့ရွာတွေက တောင်သူလယ်သမား ၁၀၀ ကျော်လောက်တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ တောင်သူလယ်သမားတွေနဲ့ တွေ့ဆုံပွဲအပြီးမှာတော့ မစုစုနွေးဟာ သွေးနှင့်ခလေးကူညီရေးအဖွဲ့ရဲ့7days ဆိုင်းဘုဒ်တင်ပွဲကိုသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် ပြည်မြို့ အန်အယ်ဒီရုံးချုပ်မှာ ဒေါက်တာဦးခင်မောင်ဝင်း ကိုလည်း သွားရောက် တွေ့ဆုံခဲ့သလို ပြည်မြို့ ရွှေစံတော်ဘုရားကိုလည်းသွားရောက်ဖူးမြော်ခဲ့ပါတယ်။ မစုစုနွေးဟာ ၂၀၀၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလမှာ စစ်အစိုးရဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုကြောင့်
ထောင်ဒဏ် ၁၂ ခွဲ ချခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၂ ရက်နေ့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်မှာ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးအတွက် သူ့ရဲ့ အနစ်နာခံလှုပ်ရှားခဲ့မှုတွေကြောင့်
ကနေဒါနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့တဖွဲ့က ပေးအပ်ချီးမြင့်တဲ့ လွတ်မြောက်ရေးဆု ၊ ချက်သမ္မတနိုင်ငံ people in need အဖွဲ့က ပေးအပ်တဲ့ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဆု အပါအ၀င် အီတလီနိုင်ငံ Agrate မြို့က ပေးအပ်တဲ့ ဂုဏ်ထူးဆောင်မြို့သားဆု တွေကို ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
11/12/2011 05:22:00 PM
﻿ မင်းကိုနိုင်မိခင် ဒေါ်လှကြည်၏ ရင်တွင်းပြောစကား
ကျွန်မဒီလိုပွဲမျိုး အတွေ့အကြုံမရှိပါဘူး၊ အဲဒီအတွက်ကြောင့် ဒီလိုပွဲမျိုးမှာ စကားပြောခွင့်ရတဲ့ဟာကို စကားပြောမှားဆိုမှားရှိရင် ကျွန်မကိုခွင့်လွှတ်ပါလို့ အနူးအညွတ် တောင်းပန်ပါ တယ်။ အခုကျွန်မမွေးနေ့မှာ ကျွန်မသားမွေးနေ့မှာ ကျွန်မလာတဲ့အခါ ကျွန်မကိုတွေ့တဲ့ ကလေးတွေက ပြောပါတယ်။ အမေ အမေ့သားကို အမေ မပိုင်တော့ပါဘူး။ တိုင်းပြည်က ပိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။
အဲဒီပြောလိုက်တဲ့ စကားလေးကို ကျွန်မအရမ်းဝမ်းလည်းသာပါတယ်။ ပီတိလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ သူတို့တွေဟာ သားအပေါ်မှာ ချစ်ကြတာကိုး။ နောက်ပြီးတော့ ကျွန်မမှာ မွေးထားတဲ့ သားလေးက တစ်ယောက်တည်းပါ။
အခု ကျွန်မမှာ သားတွေ အများကြီး ရှိနေပါပြီ။ ဝေမျှပေးတဲ့ သားတွေ၊ သမီးတွေ အများကြီး ရှိခဲ့ပါ ပြီ။ အခုလို အချိန်အခါမှာ မိဘတိုင်းဟာ ကျွန်မကို ဘယ်လိုခံစားရပါသလဲလို့ မေးကြပါတယ်။ သားသမီးရှိကြတဲ့ မိဘတွေက ဒီလိုအချိန်အခါမှာ ဘယ်လိုခံစားရမလဲဆိုတာ ရင်ထဲမှာ အကုန်လုံးရှိကြတယ်ဆိုတာ ကျွန်မပြောဖို့ မလိုပါဘူး။ အဲဒီလိုပဲ ထင်ပါတယ်။ကျွန်မတို့လိုပဲ မိသားစုအပေါင်းတွေဟာ အများအတွက်ကို အနစ်နာခံပြီးတော့ ပါရမီ ဖြည့်ပေးနေကြတဲ့
မိသားစုအားလုံးကို ကျွန်မ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာမှ လူဆိုတာ လောကဓံတရား ဆိုတာ အကုန်လုံးရှိကြပါတယ်။ အဲဒီတော့ မေတ္တာမျှဝေပေးနေတဲ့ မိသားစုတွေ အားလုံးကို အကုန်လုံးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မင်းကိုနိုင်နဲ့တကွ အကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှာ ရှိနေကြတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအပေါင်းတို့ အမြန်ဆုံး လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရပါစေလို့ ကျွန်မ ဆုတောင်းခဲ့ပါတယ်။ မိသားစုတွေ အကုန်လုံးပါ မေတ္တာပို့ အမျှပေးဝေနေသလို မိသားစုတွေကို ကျွန်မ ဘာလက်ဆောင် ပေးချင်သလဲဆိုတော့ ရှင်ဇနကဘိဝံသ ဟောထားတဲ့ တရားလေးတစ်ပုဒ် ရှိပါတယ်။ လူမှုဆိုလျှင် လူလိုပင် လောကဓံ ရှိမြဲ ၀မ်းနည်းဝမ်းသာ အများပါပဲ။ ကျွန်မ ပြောချင်ပါတယ်။ အခုချိန်မှာ ကျွန်မတို့ မိသားစုတွေ အကုန်လုံးဟာ သားလေးတွေကို မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ အဲဒီလို မျှော်လင့်တဲ့အတိုင်းပဲ အမြန်ဆုံးလွတ်ပါစေလို့ ကျွန်မ ဆုတောင်း မေတ္တာပို့သပါတယ်။ ဒါပါပဲ ကျွန်မ ပြောချင်ပါတယ်။
11/12/2011 05:06:00 PM
Eleven Media Group မှ ကျင်းပတဲ့ ၁၁.၁၁.၁၁. တစ်ခြောက်လုံး အခမ်းအနား
၁၁ ရက်၊ ၁၁ လ၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ် "၁" ခြောက်လုံးစုံသည့်နေ့ ဂုဏ်ပြုဆုတောင်းပွဲ အခမ်းအနားကို ရန်ကုန်မြို့ ဆီဒိုးနားဟိုတယ်တွင် ကျင်းပခဲ့ပြီး အခမ်းအနားသို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းက သ၀ဏ်လွှာ ပေးပို့ခဲ့သည်။အခမ်းအနားတွင် အနာဂတ် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဖယောင်းတိုင်ထွန်း ဆုတောင်းခြင်းကို ဦးဇာဂနာ၊ လှုမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များကိုယ်စား နာရေးကူညီမှုအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်သူ၊ သတင်းမီဒီယာများကိုယ်စား ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်၏ အယ် ဒီတာချုပ် ဒေါက်တာဖေမြင့်၊ NGO အဖွဲ့များကိုယ်စား ဒေါက်တာကျော်သူ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များကိုယ်စား ဒဂုံဆိပ်ကမ်းစက်မှုဇုန် အတွင်းရေးမှူး ဦးကျော်သူ၊ တိုင်းရင်းသားများကိုယ်စား ချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ချင်းအမျိုးသားပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇိုဇမ်း၊ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေရသူများကိုယ်စား ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ကို ဌေးကြွယ်၏ ညီမ မခင်မိမိကြွယ်၊ လူငယ်နိုင်ငံရေးသမားများကိုယ်စား Generation Wave မှ ကိုဇေယျာသော်၊ လူငယ်အနုပညာရှင်များကိုယ်စား သရုပ်ဆောင် အဆိုတော် ချစ်သုဝေ၊ အလုပ်သမားများကိုယ်စား လှိုင်သာယာမှ ကိုအောင်ထွန်း၊ လယ်သမားများကိုယ်စား တွံတေးမှ ကိုဇော်မင်းထွန်းစသည့် သက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်အသီးသီးမှ ကိုယ်စားပြုပုဂ္ဂိုလ် ၁၁ ဦးက ဦးစွာပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
ထို့နောက် ဦးဇာဂနာက "ကျွန်တော် တကယ် အမှန်ပြောရရင်တော့ ဆုမတောင်းတော့ပါဘူး။ ဆုတောင်းတိုင်းသာ ပြည့်မယ်ဆိုရင်ဆိုတဲ့ စကားကို ကျွန်တော် မကြိုက်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသား အားလုံးရဲ့ရင်ထဲမှာမတူညီတဲ့ဆန္ဒတွေ အားလုံးရှိနေကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမတူညီတဲ့ဆန္ဒတွေ အားလုံး ဒီကနေ့ကစပြီး ပြည့်ကြပါစေလို့ ကျွန်တော် ဆုတောင်း ပေးချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ" ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဆရာဇော်ဂျီ၏ "သင်သေသွားသော်" ကဗျာအား အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ် ၁၁ ဦးက ရွတ်ဆိုခဲ့ကြသည်။
ယင်းနောက် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းက ပေးပို့လာသည့် သ၀ဏ်လွှာကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းညွန့်က ဖတ်ကြားခဲ့ရာ ယင်းသ၀ဏ်လွှာ အပြည့်အစုံမှာ "အရာခပ်သိမ်းသည် အမြဲ မပြတ် ပြောင်းလဲနေသည်။ ကာလဒေသအခြေအနေနှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိသော ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်ရေးသည် မိမိတို့ မြန်မာ့လူဘောင်အဖွဲ့အစည်းအတွင်း သက်ဝင်လှုပ်ရှားရန် လိုသည်။ ထိုလုပ်ငန်းစဉ်များအား စဉ်ဆက်မပြတ် ပြုလုပ်နေမှသာ ငြိမ်းချမ်းသာယာပြီး ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော နိုင်ငံအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ အမိနိုင်ငံတော် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် စဉ်ဆက်မပြတ် လိုအပ်မည့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို ငြိမ်းချမ်းစွာဆောင်ရွက်နေကြသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အဖွဲ့အစည်းများအား ဂုဏ်ပြုရမည်ဖြစ်ပါသည်။" ဟူ၍ဖြစ်သည်။အခမ်းအနားတွင် ဆရာမကြီး ပါမောက္ခဒေါက်တာဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်က အမှတ်တရစကားပြောကြားခဲ့သည်။ ယင်းအပြင် ကိုမင်းကိုနိုင်၏ မိခင်ဒေါ်လှကြည်ကလည်း အမှတ်တရစကားပြောကြားခဲ့သည်။ထို့နောက် Eleven Media Group ၏ Chairman & CEO ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင်က ဂုဏ်ပြုအမှတ်တရစကား ပြောကြားခဲ့သည်။
အခမ်းအနားသို့ ဂုဏ်ပြုရန် မတက်ရောက်နိုင်သေးသည့်သူများ၊ ဂုဏ်ပြုခံနိုင်သည့်နေရာတွင် မရှိသည့်သူများ၊ ဘ၀ကို အသက်ပေးပြီး စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံခဲ့ရသူများ အားလုံးကို ဂုဏ်ပြုသည့်အနေဖြင့် စားပွဲနံပါတ် ၁၁ ကို နေရာ လွတ်အဖြစ် ထားရှိပြီး ၎င်းတို့ ကိုယ်စား ဂုဏ်ပြုစီစဉ်ထားရှိခဲ့ကာ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းခံနေရသူများ၏ မိသားစုဝင်များက အဆိုပါစားပွဲဝိုင်းတွင် ဆုတောင်းခဲ့ကြသည်။ရန်ကုန်မြို့ ဆီဒိုးနားဟိုတယ်တွင် ည ၆ နာရီ ၃၀ မိနစ်မှ ည ၉ နာရီ ၃၀ မိနစ် အထိ ကျင်းပခဲ့သည့် ၁၁ ရက်၊ ၁၁ လ၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ် "၁" ခြောက်လုံးစုံသည့်နေ့ ဂုဏ်ပြု ဆုတောင်းပွဲ အခမ်းအနားသို့ နိုင်ငံရေးပါတီများမှ ခေါင်းဆောင်များ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတ အကြံပေးများ၊ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေရသူများ၏ မိသားစုဝင်များ၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ နိုင်ငံခြားသံရုံးများမှ သံတမန် များ၊ INGO နှင့် NGO များမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ စာရေးဆရာများ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းမီဒီယာများ၊ အနုပညာရှင်များ၊ ပြည်သူများ ၇၀၀ ကျော် တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
သတင်း---- Eleven Media Group
11/12/2011 04:53:00 PM
ဧရာဝတီသတင်းဝက်ဆိုက်ဘ်တွင် အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏အမည်အားသတင်းခေါင်း စည်းတစ်ခု ၌ဖော်ပြရာတွင်"အောင်ဆန်း"ဟုခေါ်ဝေါ်သုံးနှုန်းထားခြင်းအပေါ် အပြင်းအထန်ကန့်ကွက်
ပြည်ပအခြေစိုက်သတင်းဝက်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်သောဧရာဝတီသတင်းဝက်ဆိုက်ဘ်တွင် အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏အမည်အားသတင်းခေါင်း စည်းတစ်ခု၌ဖော်ပြရာတွင်"အောင်ဆန်း"ဟုခေါ်ဝေါ်သုံးနှုန်းထားခြင်းအပေါ်ပြည်တွင်း အခြေစိုက်စာနယ်ဇင်းသမားတချို့နှင့်အွန်လိုင်းသတင်းပရိတ်သတ်များက ယခုကဲ့သို့ခေါ်ဝေါ်သုံးနှုန်းခြင်းအပေါ်အပြင်းအထန်ကန့်ကွက်ကြောင်းTheMessengerဂျာနယ်သို့ ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်ပြောကြားသည်။ http://burma.irrawaddy.org/archives/2186တွင်အဆိုပါသတင်းအားဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ကြောင်း အွန်လိုင်းသတင်းပရိတ်သတ်တစ်ဦးကပြောသည်။ အဆိုပါ သတင်းကို Myanmar News Now မှ လည်း တပါးတည်းဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အောက်မှာဆက်လက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ပြည်တွင်းစာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်လပ်ခွင့်အထိုက်အလျောက်ရလာသည့်နောက်ပိုင်း ပြည်ပအခြေစိုက်မြန်မာသတင်း ဌာန တချို့အပေါ် ပြည်သူလူထု၏ ယုံကြည်မှုမှာ တစထက်တစကျဆင်းလာကြောင်းပြည်ပအခြေစိုက်မြန်မာသတင်းဌာနအချို့သည်လွတ်လပ်စွာရေးသာခွင့်ရှိသော်လည်းသတင်းရေးသားဖော်ပြရာတွင်တဖက်စောင်းနင်းဆန်ကြောင်း ပြည်တွင်းအခြေစိုက် သတင်းအယ်ဒီတာတစ်ဦးကပြောသည်။ မကြာသေးမီကပင်လူရွှင်တော်ဇာဂနာကပြည်ပအခြေစိုက်မြန်မာသတင်းဌာနများ၏မေးမြန်းမှုများအားဖြေကြားရန်ယာယီရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းThe Messenger ဂျာနယ်သို့ပြောသည်။
ဒီသတင်းကို The Messenger ဂျာနယ် Facebook စာမျက်နှာမှကူးယူဖော်ပြပါသည်။ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ အောင်ဆန်းဓာတ်ပုံ ရန်ကုန်မှာ အရောင်းသွက်
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့၏ ဓာတ်ပုံများကို ရန်ကုန်မြို့ လူစည်ကားသည့် နေရာများတွင် ရောင်းချနေကြပြီး ထိုဓာတ်ပုံများ ပုံနှိပ်၊ဖြန့်ချိ၊ ရောင်းချခြင်းမှာ အမြတ်အစွန်း များသည့် လုပ်ငန်းတခု ဖြစ်လာသည်။
တွေ့ရသော ရန်ကုန်မြို့လယ်မှ ပိုစတာရောင်းသော လမ်းဘေးဆိုင်တခု။ ယခင်က ဈေးကွက်တွင် ရှာမတွေ့သည့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့၏ ပုံများမှာ ယခု ရန်ကုန်တွင် အရောင်းသွက်သည့် ပုံများ ဖြစ်နေသည်။ (ဓာတ်ပုံ- ဧရာဝတီ)
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ အောင်မင်္ဂလာကားဂိတ်အတွင်းမှာပင် ခေါင်းဆောင် နှစ်ဦး၏ ပုံများ ရောင်းချသည့် ဈေးသည်ပေါင်း တရာဝန်းကျင် ရှိနေသည်။ ဂျာနယ်
လက်ပွေ့ရောင်းသည့်ဈေးသည်တို့ကလည်း ထိုပုံများကို ရောင်းနေကြသည်။
ဒီသတင်းကို ဧရာဝတီ ၀က်ဆိုဒ်မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
HIV AIDS လူနာတွေအတွက် ရည်စူးပြီး ဂီတပညာရှင်တွေက သီချင်းစီဒီခွေ အသံသွင်းယူနေ (ရုပ်/သံ)
AIDS လူနာတွေအတွက် ရည်စူးပြီး ဂီတပညာရှင်တွေက မေတ္တာနဲ့ ကူညီသီဆိုပေးနေတဲ့ သီချင်းစီဒီခွေတခုကို အခုအခါ စတူဒီယိုမှာ အသံသွင်းယူနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ တေးသံရှင် ကိုသားထွေးက ဦးဆောင်စီစဉ်တာဖြစ်ပြီး ကိုနေ၀င်း၊ ကိုရဲလွင်(မဇျိမလှိုင်း)၊ ကိုစံလင်း ၊ ကိုတိုးလွင် (ဥတ္တရအလင်း) စတဲ့ ဂီတပညာရှင်တွေက မေတ္တာနဲ့ ကူညီပံ့ပိုးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ HIV AIDS ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနဲ့ ကုသရေးဂေဟာမှ တာဝန်ခံမဖြူဖြူသင်း ကိုယ်တိုင် သီချင်းခွေ အသံသွင်းယူနေတဲ့ စတူဒီယိုကို လာရောက်ပြီး အားပေးခဲ့ပါတယ်။ စုစုပေါင်း တေးသီချင်း ၁၂ ပုဒ်ပါဝင်တဲ့ အဲ့ဒီသီချင်းခွေဟာ အားငယ်နေသူတွေကို နှစ်သိမ့်ပေးနိုင်ဖို့အတွက် ရည်စူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီသီချင်း စီဒီခွေတွေကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ရုံးချုပ်မှာ ကျင်းပမှာဖြစ်တဲ့ ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်နေ့ ကမ္ဘာ့အေအိုင်ဒီအက်စ်နေ့မှာ အခမဲ့ ဝေငှပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
11/11/2011 07:41:00 PM
ရွှေတိဂုံဘုရားရင်ပြင်မှာ ကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့ မသိုးသင်္ကန်းကပ်လှူပူဇော်ပွဲအခမ်းအနား (ရုပ်/သံ)
ရွှေတိဂုံဂေါပကအဖွဲ့က ကြီးမှူးကျင်းပတဲ့ ၂၇ ကြိမ်မြောက် မသိုးသင်္ကန်းကပ်လှူပူဇော်ပွဲအခမ်းအနားကို နိုဝင်ဘာ ၉ ရက်နေ့ညက စတင်ပြီး ရွှေတိဂုံဘုရားရင်ပြင်မှာ ကျင်းပပြုလုပ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအခမ်းအနားမှာ နှစ်စဉ်ကျင်းပနေကျဖြစ်တဲ့ မသိုးသင်္ကန်းရက်ပြိုင်ပွဲကိုပါထည့်သွင်းထားတာဖြစ်ပြီး ရရှိလာတဲ့မသိုးသင်္ကန်းတော်တွေကို သက်မှတ်ထားတဲ့ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကိုးဆူမှာ လပြည့်နေ့အာရုဏ်တက် အတိုင်မီ နံနက် ၄ နာရီအချိန်မှာကပ်လှူပူဇော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ရွှေတိဂုံ ဘုးရာကိုလာရောက် ဖူးမြော်ကြတဲ့ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်က ဘုရားဖူးတွေကလည်း
မသိုးသင်္ကန်းတော်တွေကို ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မှာ ကပ်လှူပြီးစီးသည်အထိ စောင့်ဆိုင်းဖူးမြော်ခဲ့ကြတာပါ။ မသိုးသင်္ကန်းရက်ပြိုင်ပွဲမှာ ရက်ကန်းစင် ၉ စင် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြပြီး ဆုပေးပွဲကိုတော့ ည ၁၂ နာရီမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူပဲ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းက ဘုရားစေတီတွေမှာလည်း မသိုးသင်္ကန်း ကပ်လှူပူဇော်ပွဲ အခမ်းအနားတွေကို ကျင်းပသွားခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
11/11/2011 07:36:00 PM
ပြည်ပမီဒီယာများ၏ မေးမြန်းမှုများကို ဖြေကြားရန် ဇာဂနာယာယီရပ်ဆိုင်း
ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၁ ပြည်ပအခြေစိုက် မီဒီယာများ၏ ဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုများကို ဖြေကြားရန် ယာယီရပ်ဆိုင်းလိုက်ကြောင်း လူရွှင်တော်ဇာဂနာက သူ၏ Facebook အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် ရေးသားဖော်ပြထားသည်။ အဆိုပါ ကိစ္စနှင့် ပတ်သတ်ပြီး လူရွှင်တော် ဇာဂနာအား The Messenger Journal
မှ ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရာ ၎င်းက "ကျွန်တော်တို့ စေတနာနဲ့ လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကို
စေတနာပျက်အောင်၊ စေတနာကွက်အောင် အနှောင့်အယှက်ပေးသလို ဖြစ်နေတယ်။ သူတို့ ပြောတာဆိုတာတွေကြောင့် ကျွန်တော်တို့ကို ထောင်ဝန်ထမ်းတွေ မကူညီတော့ရင် ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းတွေပဲ ဒုက္ခရောက်မယ်။ လှူနေတဲ့သူတွေလဲ မလှူရဲလောက်အောင် ဖြစ်နေတယ်"ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ အောက်တိုဘာလ ၁၂ ရက်နေ့ ဒုတိယအကြိမ် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအဖြစ်မှ လွတ်မြောက်လာခဲ့သော လူရွှင်တော်ဇာဂနာသည် မလွတ်မြောက်သေးသည့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား
များကို ငွေကြေး၊ ဆေးဝါး၊ အစားအစာနှင့် လိုအပ်သည်များကို အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး ပေးပို့ လှူဒါန်းခဲ့သည်။ အဆိုပါ ကိစ္စနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ပြည်ပမီဒီယာအချို့မှ သတင်းအချက်အလက်များ မှားယွင်းဖော်ပြခဲ့ရာ လူရွှင်တော် ဇာဂနာက ပြည်ပ မီဒီယာများနှင့် ဆက်ဆံရေးယာယီရပ်တန့်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ "မီဒီယာတွေ အနေနဲ့က ဒါမျိုးမတော်တဆ လွဲချော်တာတွေ ဖြစ်တတ်တယ်။ တမင်လုပ်မယ်လို့တော့ မထင်ဘူး။ မှားယွင်းဖော်ပြခဲ့မိရင်လည်း မှားယွင်းကြောင်း ရှင်းသင့်တယ်။ မီဒီယာသမားနဲ့ နိုင်ငံရေးသမား၊ အနုပညာသမားဆိုတာ မကင်းရာ မကင်းကြောင်းတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် ညှိနှိုင်းလို့ ရမယ်ထင်ပါတယ်" ဟု ၀ါရင့် သတင်းစာဆရာ ဆရာမောင်ဝံသက ပြောသည်။ ပြည်ပမီဒီယာများသည် လုံးဝလွတ်လပ်သော အနေအထားတွင် ရှိနေရာ သတင်းအချက်အလက်များကို အချိန်နှင့် တပြေးညီ ထိရောက်လျင်မြန်စွာ ဖြန့်ဝေနိုင်စွမ်းရှိသကဲ့သို့ ၎င်းတို့ ဖြန့်ဝေသော သတင်းအပေါ်တွင် တာဝန်ယူမှုအပြည့်အ၀ပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြည်တွင်းစာနယ်ဇင်းအသိုင်းအ၀ိုင်းမှ
သုံးသပ်သည်။ "ပြည်ပအခြေစိုက် မီဒီယာတိုင်း၊ သတင်းထောက်တိုင်း ကိုတော့ မဆိုလိုပါဘူး။ တချို့ ပြည်ပ သတင်းဌာနတွေ၊ တချို့ ပြည်ပအခြေစိုက် မြန်မာသတင်းထောက်တွေ သတင်းတင်ပြပုံ၊ အင်တာဗျူးမေးပုံတွေက ပြည်သူကို တကယ်သတင်းအမှန်ပေးချင်တာထက် သူတို့ လိုချင်တဲ့လမ်းကြောင်းကို မရောက်ရောက်အောင် ဆွဲတင်သလိုဖြစ်နေတယ်။ သတင်းလက်ခံသူတွေကို သူတို့စိတ်ထဲမှာ
ဘယ်လိုထင်ထားလဲ၊ ပြည်သူက မအဘူးဆိုတာ သဘောပေါက်စေချင်တယ်" ဟု ပြည်တွင်းသတင်းဂျာနယ်တစ်ခုမှ တာဝန်ခံအယ်ဒီတာတစ်ဦးက ပြောသည်။ ပြည်ပမီဒီယာများနှင့် ဆက်ဆံရသောအခြေအနေကို လူရွှင်တော်ဇာဂနာက"တခါတလေကျရင် သူတို့က အစိုးရမကောင်းကြောင်းကို ကျွန်တော့်ကို အတင်းပြောခိုင်းသလိုဖြစ်နေတယ်။ သူတို့ ပြောချင်တာကို ကျွန်တော့်ကို အတင်းတိုက်တွန်းပြီး ပြောခိုင်းသလိုဖြစ်နေတယ်။ သူတို့အနေနဲ့ အဲဒီလို ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင် ဒီမှာ ကိုယ်တိုင်လာပြောကြစေချင်တယ်" ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ ဒုတိယအကြိမ် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဖြင့် မြစ်ကြီးနားအကျဥ်းထောင်မှ လွတ်မြောက်လာသော လူရွှင်တော် ဇာဂနာသည် လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် အနုပညာရှင်များ၏ အကူအညီဖြင့် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ အကျဉ်းထောင် ၄၂ ခုမှ မလွတ်မြောက်သေးသည့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအား လိုအပ်သည့် ကူညီမှုများ ဆောင်ရွက်ပေးနေကြောင်း သိရသည်။
သတင်း--- The Messenger Journal - Facebook သစ်ထူးလွင်
11/11/2011 07:00:00 PM
အစိုးရ၀န်ကြီး ၃ ဦးဖိတ်လို့ ဦးဟန်ညောင်ဝေ မြန်မာပြည်သွားတဲ့သတင်း ဆင်ဆာထိ
အစိုးရ၀န်ကြီး ၃ ဦး ဖိတ်လို့ ဦးဟန်ညောင်ဝေ မြန်မာပြည်သွားတဲ့စာသား သျှမ်းသံတော်ဆင့်သတင်းစဉ်က ဆင်ဆာလုပ်
၀န်ကြီး ၃ ဦးရဲ့ ဖိတ်ကြားချက်ကြောင့် ဦးဟန်ညောင်ဝေ မြန်မာနိုင်ငံသွားတာ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်နေ့စွဲနဲ့ သျှမ်းသံတော်ဆင့် သတင်းဌာနကနေ သူ့ဝက်ဆိုက်မှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ သတင်းထုတ် ပြန်ပါတယ်။ ဒီ မူရင်းသတင်းမှာ အောက်ပါ စာပိုဒ်ထဲ့ထားပါတယ်
မြန်မာသံရုံးကို ဗီဇာလျှောက်တုံးကသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးဟန်ညောင်ဝေ မြန်မာနိုင်ငံသွားမဲ့ခရီးစဉ်ဟာ မြန်မာဝန်ကြီး သုံးဦးရဲ့ ဖိတ်ကြားချက်ကြောင့်ပါလို့ ပြောတာတောင် ဦးဟန်ညောင်ဝေဟာ မြန်မာအစိုးရက လက်မခံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့ အဆင့်အတန်း (Persona non grata) သတ်မှတ်ခံထားရသူ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း မြန်မာသံရုံးက ပြောတယ်လို့ သျှမ်းသံတော်ဆင့်က ရေးထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နိုဝင်ဘာ ၄ ရက်နေ့ သျှမ်းသံတော်ဆင့် ၀က်ဆိုက်ကိုကြည့်တဲ့အခါ ဦးဟန်ညောင်ဝေသတင်းမှာ အထက်က စာပိုဒ်ကို ဖြုတ်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဖြုတ်ရတယ်ဆိုတာလဲ ရှင်းပြထားတာ မတွေ့ရပါ။ ဦးဟန်ညောင်ဝေရဲ့ သိက္ခာဆည်ဖို့အတွက် ဖြုတ်ပေးတာလား ကာယကံရှင်က ဖိအားပေးလို့လားဆိုတာလည်း မသိရပါ။
ဒါပေမဲ့ ဘယ်မြန်မာဝန်ကြီး ၃ ဦးက ဖိတ်ကြားထားတာဖြစ်တယ်၊ ဘယ်နိုင်ငံရှိ မြန်မာသံရုံးကပြောတယ်စတဲ့ အသေးစိတ်အချက်တွေကိုတော့ သျှမ်းသံတော်ဆင့်က ရေးမထားပါဘူး။
နောက်ဆုံး အာမခံတဲ့ မြန်မာဝန်ကြီးတဦးအမည်ကို ချရေးပေးတော့မှ မြန်မာသံရုံးက ဗီဇာထုတ်ပေးတယ်လို့ သျှမ်းသံတော်ဆင့်သတင်းမှာ
ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒီအကြောင်းလဲ နိုဝင်ဘာ ၄ ရက်မှာ update လုပ်ထားတဲ့ သတင်းမှာ ပြန်မပါတော့ပါ။
ဦးဟန်ညောင်ဝေဟာ ရန်ကုန်မှာရှိစဉ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ခွင့်ရရေးအတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အနီးကပ် လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တဦး အကူအညီနဲ့ အပြင်းအထန်ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ တွေ့ခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အနီးကပ် လုပ်ဘော်ကိုင်ဘက်ရဲ့ အမည်ကို ပြောပြဖို့ ဦးဟန်ညောင်ဝေက ငြင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အနီးကပ် လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်က ဦးဟန်ညောင်ဝေကို ပြန်ပြောတာက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုအနေနဲ့
ဦးဟန်ညောင်ဝေကို ယုံကြည်ဖို့လိုသေးတယ်လို့ ပြောတဲ့အကြောင်း ဦးဟန်ညောင်ဝေက သျှမ်းသံတော်ဆင့်ကို ပြောပြပါတယ်။
မူရင်း အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့သတင်းကို အောက်မှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
Harn Yawnghwe winds up “fruitful” tour of home country - Burma News International
regarded his 8-day visit to Burma, 20-28 October, asafruitful eye-opener, said Harn Yawnghwe, director of Brussels-based Euro-Burma Office (EBO) and youngest son of the late first President of Burma who went into exile with his mother in 1963.
only problem he faced was when he applied for his visa. Despite being invited by three ministers, he was technically stillapersona non grata, the embassy told him. It was finally issued, only after he had put downaminister’s name as his guarantor.
There were only two fixed items on his agenda: To visit his hometown Yawnghwe, once the seat of one of the most powerful Shan princedoms, and
Rangoon, where he went to school. But it turned out most of his time there were filled up byaflurry of meetings with 12 political parties andanumber of high ranking regime officials.
“I didn’t meet anybody saying anything negative about what’s taking place in Burma,” he remembered.
* One senior police officer: This is just what we’ve been waiting for so long. * An Inlay shopkeeper: Since you are back after all these years, things must be moving for the better for our country. * A Shan Nationalities Democratic Party (SNDP) leading member: Since the Union Solidarity and Development Party (USDP) is made up of all national races, including Shans, cooperation is better than expected earlier.
Apart from the SNDP, he also held meetings with5democracy parties, remaining4Nationalities Brotherhood parties and the deregistered Shan Nationalities League for Democracy (SNLD). “All seemed to be saying three things to me:
* The government under U Thein Sein leadership is really working for change * Change won’t come easy. Old systems and laws are still in place. It’ll take some time before new systems and laws can move in. The new labor act, for instance, came into being because of the assistance by the ILO. It means exiles can take part in drafting new laws. And it should not be considered as propping up the old regime, but as help strengthening democracy in the country. * Support and encouragement therefore are needed to make the changes in the making irreversible”
He earlier told Financial Times, “They have decided to change. It’s not what we called for, but there are changes. Even if they are pretending to change, we should push them so the change becomes irreversible.”
His argument found an ally at least in the National League for Democracy’s U Win Tin. “Our line of thinking does not differ from yours,” Harn was told.
“Unfortunately, I didn’t get the chance to meet The Lady, despite tireless efforts made by one of her close associates,” he said.
He declined to name the said close associate, but said he is one of her intimates who still carries deep mistrust of Thein Sein. “She told me I need to have trust in him,” he said to Harn.
Without doubt, the country’s top leadership is made up of two factions, divided by conflicting personal feelings and ways of thinking,
according to him:The Gang of Four:
Vice President #1 Tin Aung Myint OoUpper House Speaker Khin Aung MyintInformation Minister Kyaw HsanFinance Minister Hla Tun
“They have reportedly urged the Senior General (Than Shwe) to stage a
comeback, but unless Thein Sein makesabig blunder thereby giving him sufficient excuse, it is unlikely he will return”, he reasoned.The “Reformists”:
President Thein SeinLower House Speaker Thura Shwe MannRailway Transport Minister Aung MinIndustry #1 Minister Soe Thein(and
surprise, surprise) Electric Power Minister Zaw Min(whose declaration “not to back off” from the Myitsone project had triggeredaseries of popular actions culminating in its suspension)
“However, the fence sitters are still the majority in the top echelon, I was told,” he said. “They are naturally waiting to see which direction the wind is blowing before they make up their minds.”
Negotiations forarenewed ceasefire are conducted byateam led by U
Aung Thaung, USDP Secretary #1 and U Thein Zaw, Chairman of Lower House
National Races Affairs and Internal Peace making committee, on the Sino-Burmese front. It has notable but not surprising success with the Wa and Mongla groups, but “nothing but love” with the Kachins. Despite negotiations since June, war between the two has intensified much to the
chagrin of the local populace.
“An alternative for the Kachin Independence Organization (KIO), if it
is not held up by the United Nationalities Federal Council (UNFC) the alliance of which it is the leading member, is to propose to Naypyitaw for an appointment ofanew negotiating team,” said Harn.
Coincidentally, on the Thailand-Burma side, another team led by U Aung Min had been seeking out appointments with the armed groups along the border. It had already met the Karen National Union on9October 2011, though details have yet to be disclosed. A source said the Karens were impressed with Aung Min who used to serve on the Karen front.
Harn Yawnghwe, while in Rangoon on Thursday, 27 October, told the5democracy parties “he would try to help in making peace in ethnic areas,” reported Mizzima News quoting Nayyi Ba Swe, daughter of former prime minister U Ba Swe.
“I was asked (byaregime official) what I thought of about its ‘group-by-group’ approach, shunning the UNFC approach,” Harn recalled. “I told them at the initial level which is for conclusion of ceasefire agreements, it should be okay to deal groupwise. But when it comes to political negotiations, all stakeholders should be invited.”
He said he had also urged the government to release the political prisoners as soon as possible, so to dispel the lingering doubts, if nothing else.
Other opposition movements meanwhile are makinga3 point call: Release of all political prisoners, nationwide ceasefire and inclusive dialogue.
update လုပ်ထားတဲ့သတင်းကို အောက်မှာ ဖတ်ပါ
Harn Yawnghwe winds up “fruitful” tour of home country Monday, 31 October 2011 13:35 S.H.A.N. He regarded his 8-day visit to Burma, 20-28 October, asafruitful eye-opener, said Harn Yawnghwe, director of Brussels-based Euro-Burma Office (EBO) and youngest son of the late first President of Burma who went into exile with his mother in 1963.
Harn Yawnghwe with his daughter arriving in Rangoon
were only two fixed items on his agenda: To visit his hometown Yawnghwe, once the seat of one of the most powerful Shan princedoms, and
One senior police officer: This is just what we’ve been waiting for so long.
An Inlay shopkeeper: Since you are back after all these years, things must be moving for the better for our country.
A Shan Nationalities Democratic Party (SNDP) leading member: Since the Union Solidarity and Development Party (USDP) is made up of all national races, including Shans, cooperation is better than expected earlier.
The government under U Thein Sein leadership is really working for change
Change won’t come easy. Old systems and laws are still in place. It’ll take some time before new systems and laws can move in. The new labor act, for instance, came into being because of the assistance by the ILO. It means exiles can take part in drafting new laws. And it should not be considered as propping up the old regime, but as help strengthening democracy in the country.
Support and encouragement therefore are needed to make the changes in the making irreversible”
He declined to name the said close associate, but said he is one of her intimates who still carries deep mistrust of Thein Sein.
11/11/2011 06:44:00 PM
ပြဿနာတွေနဲ့ ပတ်ချာဝိုင်းနေတဲ့ ၀န်ကြီးချုပ် ထွက်ပေးဖို့ ငြင်းဆို
အစိုးရရဲ့ ကပ်ဘေးကိစ္စတွေ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေမှုအပေါ် ဝေဖန်မှုတွေ တိုးလာနေပေမဲ့လည်း သူ့အနေနဲ့ ဒီရာထူးမှာ ဆက်နေပြီး ရေဘေးဒုက္ခတွေကို ဆက်လက်ဖြေရှင်းသွားဖို့ ၀န်ကြီးချုပ် ယင်လပ်ရှီနာဝပ်ထ်က အာမခံပြောကြားလိုက်
အယုဒ္ဓယမှာရှိတဲ့ ရိုကျနာစက်မှုဇုံက ရေတွေကို စုပ်ထုတ်ဖို့ ရေစုပ်စက် ၃၀၀၀ လောက် ဖြန့်ချထားပုံ
ရေဘေးပြဿာနာကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရာမှာ စီမံခန့်ခွဲမှုမှားယွင်းတယ်ဆိုပြီး ပညာရှင်တွေနဲ့ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေက အစိုးရနဲ့ နိုင်ငံတော်အဖွဲ့အစည်းတွေကို တရားစွဲဆိုဖို့ ခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုနေတာကြောင့် အစိုးရအပေါ် ဖိအားပေးတဲ့ အ ခြေအနေတရပ် ရှေ့တန်းရောက်လာနေပါတယ်။ သူတို့ရဲ့အိမ်တွေ၊ ၀င်ငွေတွေဆုံးရှုံးရတဲ့သူတွေအတွက် လျော်ကြေး ပေးဖို့ အစိုးရကို တရားစွဲဆိုတဲ့လုပ်ရပ်တွေကို စနိုင်တော့မှာ ဖြစ်တယ်လို့ စီးပွားရေးပညာရှင်တဦးက ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ တိုင်းပြည်ကို ဦးဆောင်ဖို့ သူ့ကို လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားလို့ ဆင်းပေးဖို့ ဘယ်တော့မှ စိတ်ကူးမှာ မဟုတ်ကြောင်း၊ ခွန် ယင်လပ်က ပြောဆိုပါတယ်။ “ကျမ၀န်ကြီးချုပ်ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ရေဘေးနဲ့ပတ်သက်လို့ အကုန်လုံး ကျမ မသိပါဘူး၊ ဒါပေမဲ့ ကျမအနေနဲ့ မဖြေရှင်းဘဲ မနေပါဘူး၊ ကျမတို့
ဘာလို့ ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်တာကို မကူညီရမှာလဲ။ ဒီအကြပ် အတည်းကို ဘာလို့ မကျော်လွှားနိုင်ရမှာလဲ” လို့ သူမက ပြောပါတယ်။
လတ်ဖရောက်နယ်မြေ၊ ကုန်တိုက်ကြီးအပြင်ဖက် ရေလွှမ်းနေတဲ့ ဖဟွန်ယိုထင်လမ်းမပေါ်မှာ လူထုတွေ မီးမျှောပွဲ ကျင်းပ နေစဉ်
နိုဝင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၁ (ဘန်ကောက်ပို့စ်)
11/11/2011 06:38:00 PM
ခင်ဗျားတို့ ဘာတွေလုပ်နေလဲ (ဇာဂနာ)
တိုင်းပြည် နိုင်ငံရေးအကြောင်းပြောရင် ခေါင်းဆောင်တွေ ဘာလုပ်နေသလဲဆိုတာ အမြဲပြောလေ့ပြောထ ရှိကြပါ တယ်။ ငယ်သားတွေ နောက်လိုက်တွေကော ဘာလုပ်နေလဲလို့ ပြောကြစေချင်ပါသေးတယ်။ တဆိတ်ရှိ အစိုးရကို အပြစ်တင် လိုက်၊ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကို ဝေဖန်လိုက်နဲ့ ပြည်သူတွေကရော ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်
(သူနဲ့သူ့ နိုင်ငံအကြားမှာ တာဝန်နဲ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ ကြိုးနှစ်ကြိုး ချည်နှောင်ခံထားသူပါ)
ကိုယ့်တာဝန် ကိုယ်မယူဘဲ ကိုယ့်တာဝန်ကို သူများအပေါ် ပုံထားတဲ့ သူတွေက နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးဆိုတာကို တစာ စာ တောင်းသင့်ရဲ့လား။ သားသမီးဝတ် မကျေပွန်ဘဲ သားသမီးအခွင်းအရေးကို ဇွတ်အတင်းတောင်းနေတာ တရားနည်း လမ်း ကျပါရဲ့လား။
(၁) တဦးချင်းစီးရဲ့ အရေးနဲ့
(၂) အစုအဖွဲ့ရဲ့ အရေးဆိုတဲ့ တာဝန် နှစ်ရပ် ရှိပါတယ်။
ခရစ်တော် မပေါ်ခင် ဘီစီ ၄၃၁ တုန်းက ပရီကယ်လိစ်ရဲ့ စကားလေး တခွန်း ဖောက်သည်ချပါရစေ။
(လူဟာ ကိုယ့်အိမ် ကိုယ့်မိသားစုကို စောင့်ရှောက်ရမယ့် ဝတ္တရားရှိသလို ပြည်သူ့အရေးအရာကိုလည်း မျက်ကွယ်မပြုရ ဘူး။ နိုင်ငံသားတိုင်းဟာ သူ့နိုင်ငံရဲ့ တရားသူကြီးတွေပါပဲ) တဲ့။
ဒီတော့ ခေါင်းဆောင်မဟုတ်တဲ့ နိုင်ငံသားတွေက …
(၁) နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးနဲ့ တာဝန်
(၂) နိုင်ငံရေး အခွင့်အရေးနဲ့ တာဝန်
(၃) လူမှုရေး အခွင့်အရေးနဲ့ တာဝန် သုံးမျိုးလုံး ကျေပွန်ကြဖို့ လိုပါတယ်။
နိုင်ငံသား အခွင့်အရေးဆိုတာ တဦးချင်း တယောက်ချင်းနဲ့ ဆိုင်တာပါ။ လွတ်လပ်စွာ ပြောခွင့်ရေးခွင့် စီတန်းလှည့်လည် ခွင့် ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့။ ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် ပါပဲ။ ဒါတွေကို လုပ်ချင်လုပ် မလုပ်ချင်နေပေါ့။ ကိုယ်နဲ့သာ ဆိုင်ပါတယ်။ လုပ်ချင်လည်းလုပ် မလုပ်ချင်လည်း နေပိုင်ခွင့်ရှိကြပါတယ်။ ဒီတော့ ဒီအခွင့်အရေးကို အနုတ်လက္ခာဆောင်တဲ့ အခွင့်အ
နိုင်ငံရေး အခွင့်အရေးဆိုတာ ကျတော့ မဲပေးခွင့်၊ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ခွင့်၊ တနိုင်ငံလုံးအတွက် အကျိုးကျေးဇူး ဖြစ်ထွန်း မယ့် ကိစ္စရပ်တွေမှာ ပါဝင်ခွင့် စတာတွေပါပဲ။ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဝင်ခွင့်မရရင် ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်ခွင့်ရှိတာ နိုင်ငံသားတိုင်း တာဝန်ပါပဲ။
လူမှုအခွင့်အရေး ဆိုတာကျတော့ စာသင်ကြားခွင့်၊ ကုသခွင့်၊ နိုင်ငံရေး ဝေဖန်ဆွေးနွေးခွင့်၊ တန်းတူညီမျှ စီးပွားရှာခွင့် ဆို တာတွေ ပါပဲ။ စီးပွားရေးမှာ လက်ဝါးကြီးအုပ် မောင်ပိုင်စီးတာကို ဝိုင်းပြီး ကန့်ကွက်ဆန့်ကျင်ဖို့က နိုင်ငံသားတိုင်းရဲ့ တာ ဝန် ပါပဲ။
အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးနဲ့ လူမှုအခွင့်အရေးကိုတော့ အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့ အခွင့်အရေးလို့ ဆိုကြရအောင်ပါ။
ဒီတော့ဗျာ လွတ်လပ်စွာ ဆန္ဒပြခွင့်လောက်နဲ့တင် နိုင်ငံသား တာဝန်မကျေပွန်သေးဘူးလို့ ကျနော်ကတော့ ပြောရမှာပဲ။ ဒီနေ့ကမ္ဘာမှာ အခွင့်အရေးနဲ့ တာဝန်ကို တွဲပြီး ပြောနေကြရပါပြီ။ (အခွင့်အရေးအတွက် နိုင်ငံရေး) ဆိုတဲ့ စကားကို (အား လုံးကောင်းဖို့ နိုင်ငံရေး) ဆိုတဲ့ စကားနဲ့ အစားထိုး သုံးစွဲကြပါစို့။ အားလုံးကောင်းစေချင်ရင် ကိုယ်ကလည်း ကောင်းကြ ပါ။ ဒီမိုကရေစီဆိုတာ ပြည်သူပိုင် အုပ်ချုပ်ရေးပါ။
ကိုယ်အပါအဝင် ကိုယ့်အသိုက်အဝန်းရဲ့ တာဝန်ကို နိုင်သလောက် ဝိုင်းထမ်းကြမှ
နိုင်ငံသား ပီသတော့မှာပေါ့။ Autonomy ဆိုတာ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးပဲ၊ ခင်ဗျားတို့ ကျနော်တို့ နိုင်ငံသားတွေ ကိုယ့်တာဝန်နဲ့ကိုယ် အုပ်ချုပ်တတ်ကြ ဖို့ လိုပြီ။ ဒါမှလည်း ကျနော်တို့နိုင်ငံ တိုးတက်မှာပေါ့။ လူ့အခွင့်အရေး ချက်ချင်းပေး၊ လူ့အခွင့်အရေး ချက်ချင်းပေးလို့ အော်တိုင်းသာ ပြည့်ဝမယ် တိုးတက်မယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ ကမ္ဘာကြီး အသံဝင်တာ ကြာရောပေါ့။
(ပြည်သူ့ခေတ် ဂျာနယ်၊ အတွဲ ၂၊ အမှတ် ၆၈၊ ၁၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၁ မှ ကူးယူဖေါ်ပြပါသည်)
11/11/2011 11:24:00 AM
အိန္ဒိယ လုပ်ငန်းရှင်တွေ မြန်မာမှာ ရင်းနှီးဖို့ စိတ်ဝင်စား
ကားစက်ရုံလို အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့ အိန္ဒိယ က စိတ်ဝင်စား
အိန္ဒိယ လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ရှိနေပြီး ရင်းနှီး မြှပ်နှံရေး နဲ့ ကုန်သွယ်ရေးတွေ တိုးမြှင့်နိုင်ဖို့အတွက် စူစမ်းလေ့လာ နေကြတယ်လို့ ရန်ကုန် စီးပွားရေးသတင်းရပ်ကွက်အရ သိရပါတယ်။မနေ့ကစလို့ လေးရက်ကြာ အိန္ဒိယ ကုန်စည်ပြပွဲကိုလည်း ရန်ကုန်မြို့မှာ ကျင်းပနေပြီး ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ တိုးမြှင့်နိုင်မယ့်အခွင့်အလမ်းတွေကို ရှာဖွေနေသလို အိန္ဒိယ လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာ ရင်းနှီးမြှပ်နှံဖို့ မြန်မာ လုပ်ငန်းရှင် တွေနဲ့လည်း သီးသန့်ဆွေးနွေးပွဲတွေ ကျင်းပခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။နိုဝင်လာလ ရ ရက်နေ့က အိန္ဒိယ စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (CII) က လုပ်ငန်းရှင် အယောက် ၁၀၀ လောက်နဲ့ ရန်ကုန်မှာ ရှိတဲ့ မြန်မာအိန္ဒိယ လုပ်ငန်းရှင် များ အသင်း အဖွဲ့ဝင်တွေ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။သူတို့အနေနဲ့ အကြီးစား စက်မှုလုပ်ငန်းကြီးတွေမှာ ရင်းနှီးမြှပ်နှံလုပ်ကိုင်လိုကြတယ်လို့ မြန်မာ အိန္ဒိယ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း ဥက္ကဌ ဦးမောင်ရွှေ က ပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ အိန္ဒိယ နိုင်ငံတို့ကြားမှာ ကုန်သွယ်ရေးအားဖြင့်တော့ ၇ နှစ်အတွင်း နှစ်ဆကျော်လောက် တက်လာပါတယ်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်အတွင်း နှစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရေးဟာ ဒေါ်လာ သန်း ၁၃၀၀ လောက်ရှိပြီး မြန်မာ ဘက်က တင်ပို့မှုက ဒေါ်လာ သန်းတစ်ထောင် လောက်ရှိပါတယ်။မြန်မာဘက်က အများစု တင်ပို့တဲ့ ကုန်စည်ကတော့ ပဲ နဲ့ သစ်တွေ ဖြစ်ပြီး အိန္ဒိယ ဘက်ကတော့ အများစုက ဆေးဝါး၊ သံနဲ့ လျှပ်စစ်ပစ္စစည်းတွေ ပြန်တင်ပို့ပါတယ်။ဒါပေမယ့် နှစ်နိုင်ငံ စီးပွားရေး ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ဖို့ နဲ့ အိန္ဒိယ ပုဂ္ဂလိက ပိုင်းဘက်ကနေ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုတွေ တိုးတက်နိုင်ဖို့မှာတော့ ဘဏ်လုပ်ငန်းနဲ့ ငွေကြေးလဲလှယ်ရေးဆိုင်ရာတွေလိုမျိုး အခက်အခဲတွေ ရှိနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ဒါပေမယ့် ဒီအခြေအနေတွေဟာ အမေရိကန်ဘက်က ပိတ်ဆို့မှုတွေရပ်သွားရင်၊ နောက်ပြီး နှစ်နိုင်ငံဘဏ္ဏာရေးအဖွဲ့တွေ တိုက်ရိုက် လုပ်ဆောင်နိုင်ရင် အလားအလာက အများကြီး ပိုကောင်း လာနိုင်တယ်လို့လည်း မြန်မာ အိန္ဒိယ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း ဥက္ကဌ ဦးမောင်ရွှေ ပြောပါတယ်။အိန္ဒိယ မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာ နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်နေ့မှာလည်း နောက်ထပ် ဆွေးနွေးကြဦးမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အကောင်းဆုံး သတင်း ဖြစ်စဉ် တင်ပြမှု ဘီဘီစီ မြန်မာ ဌာန အထူးဆုရ
ဘီဘီစီ မြန်မာ ဌာနမှူး ဒေါ်တင်ထားဆွေ ဆုလက်ခံ ယူခဲ့
နိုင်ငံတကာ ရုပ်သံနဲ့ အသံလွှင့် အဖွဲ့ကြီး ဖြစ်တဲ့ The Association for International Broadcasting AIB က မနေ့က လန်ဒန်မြို့မှာ အပ်နှင်းခဲ့တဲ့ ၂၀၁၁ ခုနှစ် အတွက် သတင်း ဖြစ်စဉ် တစ်ခုကို အကောင်းဆုံးနဲ့ အရှင်းလင်းဆုံး တင်ပြ နိုင်တဲ့ ဆုမှာ ဘီဘီစီ မြန်မာ ဌာနက အထူးဆု ဆွတ်ခူး ရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီ ဆု အမျိုး အစားမှာ ဘီဘီစီ ရေဒီယို အမှတ် (၅) BBC Radio5Live က အကောင်းဆုံးဆု ဆွတ်ခူးခဲ့ ပါတယ်။AIB အဖွဲ့က ကမ0x081ဘာ တဝန်းလုံးမှာ ရှိတဲ့ သတင်း ဌာနတွေထဲက အကောင်းဆုံး ရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ ရေဒီယို သတင်း တင်ပြမှုဆု၊ အကောင်းဆုံး အစီအစဉ် တင်ဆက်သူဆု စတာတွေကို ရွေးချယ်ပြီး ဆုချီးမြှင့် ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ဘီဘီစီမြန်မာ ဌာနက ဆွတ်ခူးခဲ့တဲ့ ဆုကတော့ မနှစ်က ၂၀၁၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၃ ရက် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် နေအိမ် အကျယ်ချုပ် ကနေ ပြန်လည် လွတ်မြောက် လာခဲ့တဲ့ နေ့က သတင်း တင်ပြမှု တွေ ကောင်းမွန်တဲ့ အတွက် အခုလို အထူးဆု အပ်နှင်းတာ ဖြစ်တယ်လို့ နိုင်ငံတကာ ရုပ်သံနဲ့ အသံလွှင့် အဖွဲ့ AIB က ပြောပါတယ်။မြန်မာ ဌာနဟာ ပြည်တွင်းမှာ သတင်းထောက် ထားရှိပြီး သတင်း ရယူနိုင်ခြင်း မရှိပေမဲ့ စုဆောင်း ရရှိတဲ့ သတင်း အချက်အလက် တွေကို မှန်မှန်ကန်ကန် စုစည်းပြီး စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကောင်းအောင် တင်ပြခဲ့တယ်၊ သောတရှင်တွေ သိလိုတဲ့ သတင်း တွေကို အချိတ် အဆက် မိမိ တင်ပြ သွားနိုင်တယ်လို့ AIB က မှတ်ချက် ပေးပါတယ်။ကိုယ်တိုင် အခမ်း အနားတက်ရောက်ပြီး ဆုလက်ခံ ရယူခဲ့တဲ့ ဘီဘီစီ မြန်မာ ဌာနမှူး ဒေါ်တင်ထားဆွေကတော့ မြန်မာ ဌာနဟာ အရင်တုန်းကလည်း သတင်း တင်ဆက်မှုပိုင်း ဆိုင်ရာ ဆုတွေ လက်ခံ ရရှိခဲ့ဖူး ပေမဲ့ အခု တကြိမ်က ပိုပြီး ထူးခြားတယ်၊ အကြောင်း ကတော့ အရင် ဆုတွေဟာ ဘီဘီစီ အဖွဲ့ အစည်း အတွင်းက ချီးမြှင့်တဲ့ ဆုတွေ ဖြစ်ပြီး အခုက နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့ အစည်းက ချီးမြှင့်တာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက်နေ့က ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် လွတ်ရမယ့် ရက်ဖြစ်လို့ သူ လွတ်မြောက် လာရေးကို အားလုံးက မျှော်လင့် နေခဲ့ကြပေမဲ့ ဘယ်သူမှ လွတ်မယ် ဆိုတာ အတိအကျ ကြိုတင်မသိခဲ့ကြရဘဲ ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်တယ်၊ အခုလို ဆုရရှိတဲ့ အတွက် ဘီဘီစီ မြန်မာ ပိုင်း အစီအစဉ်က ဝန်ထမ်းတွေ အားလုံး ဂုဏ်ယူရမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဒေါ်တင်ထားဆွေက ပြောပါတယ်။
မန္တလေး-မြစ်ကြီးနား ခရီးသည်တင်ရထား KIA ခြုံခိုတိုက်
မန္တလေး-မြစ်ကြီးနား ရထားတစင်းကို KIA
ဘက်က ခြုံခိုတုိုက်ခုိုက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတုိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ရထားဝန်ထမ်းတဦး အနည်းငယ် ထိခုိုက်သွားတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။ မြန်မာအစိုးရ စစ်တပ်က KIA အပေါ် ထိုးစစ်အရှိန်မြှင့်လာတဲ့အချိန်မှာ KIA ကလည်း အခုလို တုိုက်ခိုက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီသတင်းအပြည့်အစုံကိုတော့ ထုိုင်းအခြေစိုက် သတင်းထောက် နူးပန်က တင်ပြပေးထားပါတယ်။
မန္တလေးကနေ မြစ်ကြီးနားကို တက်လာတဲ့ အစိုးရ ရထားတစ်စင်းကို KIO တပ်ရင်း ၁၁ က ခြုံခို တိုက်ခိုက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်တွေ စစ်အင်အားဖြည့်ရာမှာ လက်နက်နဲ့ စစ်သားတွေကို ရထားတွေနဲ့ အဆက်မပြတ် ပို့ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာ ခုလို ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်တယ်လို့ နမ္မတီး ဒေသခံတစ်ယောက်က ခုလိုပြောပါတယ်။
“မနက်ပိုင်း ၆ နာရီခွဲ ၇နာလောက်ပေါ့နော်။ အဲအချိန်မှာ ခေါက်ပြန်ရထား
မရန့်နဲ့ နမ္မတီးကြား တံတား ညီနောင်မှာ ဗုံးပေါက်ကွဲပြီးမှ စက်ဆရာကို မှန်တွေဘာတွေ ကွဲတဲ့ဟာက စက်ဆရာရဲ့ မျက်နှာမှာ နည်းနည်းပွန်းပဲ့သွားတယ်လို့ အဲဒီလို သတင်းရတယ်။ ပုံမှန်တော့ သွားနေတာပဲ။ တခြားတွဲမှာ ရဲဘော် တွေတော့ တစ်ခါတရံ လေး ငါးတွဲ ပါတယ်လို့ အဲဒီလို သတင်းတော့ ရပါတယ်။ အမြန်ရထား ဒုတိယ အမြန်တို့၊ ပထမအမြန်တို့မှာ ရဲဘော်တွေစီးပြီး တက်လာတယ်လို့ သတင်းတော့ ရပါတယ်”
မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်တွေက ကချင်ပြည်လွပ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ရှိရာ ဒေသတလျှောက်
အဆက်မပြတ် ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီး စစ်အင်အားကိုလည်း ကချင်ဒေသကို ရေလမ်း၊ ကုန်းလမ်းနဲ့ နိုဝင်ဘာ လဆန်းပိုင်းကနေ ပိုတိုးဖြည့်နေတာလို့ မြစ်ကြီးနားဒေသခံတယောက်ကလည်း အခုလို ပြောပါတယ်။
“KIO ခေါင်းဆောင် ဇောင်းဟရားကို သိန်းဇော်က အပစ်ခတ်ရပ်စဲတဲ့စာ ပို့တယ်ဆိုပေမယ့် ပိုပြီးမှ စစ်အင်အား တိုးချဲ့တာကို အခါတိုင်းထက်ကို တိုးချဲ့တာကို သိရတယ်။ မြစ်ဆုံကိုလည်း ကား၂ စင်း အပြည့်နဲ့ တက်သွားတာကို သိရတယ်”
မြန်မာစစ်တပ်တွေရဲ့ ထိုးစစ်ဆင်မှုများကြောင့်လည်း ခုရက်ပိုင်း ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ဌာနချုပ် လိုင်ဇာသွားလမ်းတ၀ိုက်မှာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီး ဗန်းမော် -လွယ်ဂျယ်လမ်းပိုင်း ခ၀မ်ဘမ် (ကျောက်စခန်း) ဒေသအပြင်နဲ့ တာပိန်မြစ်၊ ရေအားလျှပ်စစ်ရှိရာ ဆန်ဂန်မှာလည်း ၃
ရက်ကြာ ပြင်းပြင်းထန်ထန် စစ်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့ KIO အဖွဲ့က ပြောပါတယ်။
နှစ်ဘက်အကျအဆုံးရှိရာမှာ မြန်မာစစ်တပ်ဘက်မှ အနည်းဆုံး ၂၀ ကျဆုံးပြီး KIO ဘက်ကလည်း ထိခိုက် ကျဆုံးမှုရှိကြောင်း သိရပေမယ့် အတညိပြုခြင်းတော့ မရှိသေးပါဘူး။
အခုလို တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာပဲ တဘက်မှာလည်း ဒေသခံတွေရှိတဲ့ကျေးရွာကို မြန်မာအစိုးရက KIO တပ်ရင်း ၃ နယ်မြေ ဆန်ပိုင်နဲ့ ဂါးရားယန်ဒေမှာ အိမ်ခြေ ၅၀ ခန့်ရှိတဲ့ ကျေးရွာကို မီးရှို့ဖျက်ဆီး မှုကြောင့်
ထောင်နဲ့ချီတဲ့ ဒေသခံတွေအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြပါတယ်။ ကျေးရွာတွင်း စစ်သားများဝင်ရောက်ပြီး နေအိမ်ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရသူ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ကချင်လို အခုလို ပြောပြပါတယ်။
သူပြောသွားတာကတော့- ကျမတို့ကို သူပုန်ဆိုပြီး ကလေးနဲ့ မိခင်တွေအားလုံးကို သတ်ပစ်မယ်လို့ ပြောတယ်။ တချို့ကိုတော့ နှိပ်စက်တာ၊ နှိပ်စက်တာ ခြေထောက်တွေလည်း မကောင်းတော့ဘူး။ တကိုယ်လုံးလည်း ပျက်စီးကုန်ကြပြီ။ အသက်မသေရုံတမယ်ပဲရှိတယ်။ အိမ်မှာရှိတဲ့ ပိုက်ဆံတွေ၊ အလှူငွေတွေ၊ စောင်တွေ အားလုံးလည်း သူတို့ကြိုက်တာ အကုန်ယူသွားတယ်။ ပြီးတော့ ဖျက်ဆီးတယ်။ အိမ်ကို မီးတွေ ရှို့တယ်။ ၃ ယောက်ကိုတော့ သေနတ်နဲ့ရိုက်တယ်။ ဘုရားကျောင်းပလင်ပေါ်မှာဆိုရင် သွေးတွေပဲ။ သူတို့ကိုလည်း သေနတ်နဲ့ချိန်ပြီး ခေါ်သွားကြတယ်လို့ သူက ပြောသွားတာပါ။ ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း ၃ ရှိရာ ဌာနချုပ်ဘက်ကို အစိုးရတပ်ရင်း ၁၀ ရင်းခန့် စုပေါင်းပြီး အလုံးအရင်း ချီတက်လာနေသလို KIA ဘက်ကလည်း ခုခံတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက် လမ်းတလျှောက် ကျေးရွာသားတွေလည်း နှိပ်စက်ဖမ်းဆီးမှုခံရပြီး ဒေသခံတွေလည်း နယ်စပ်ကို ထောင်ချီထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်နေကြတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
11/11/2011 09:47:00 AM